YEYINTNGE(CANADA): Sunday, August 05
by Yangon Press International on Sunday, August 5, 2012 at 9:00am ·
ယင်းကျေးရွာတွင် အိမ်ခြေ ၁၀၀ ကျော်သာရှိသဖြင့် ယခုတကြိမ်မီးလောင်ပြီးနောက် အိမ်ခြေ ၃၀ ကျော်သာကျန်ရှိတော့ကြောင်းလည်း သိရသည်။
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 8/05/20120အကြံပြုခြင်း
by Yangon Media Group on Sunday, August 5, 2012 at 1:45pm ·
ပြည်ပမီဒီယာများ၏ မသာမာမှုများကို မျက်ဝါးထင်ထင် သူတို့မြင်တွေ့ သွားခဲ့ ရလေပြီ
ရခိုင်ပြည်နယ်၌ ဖြစ်ပျက်နေသော ပဋိပက္ခများမှာ ပြည်ပမီဒီယာများကြောင့် မီးခိုးမဆုံး မြေဆုံး အကြီးအကျယ် ဂယက်ထဖြစ်ခဲ့ သည် ။ လက်နက်ဆိုလို့အပ်တိုတချောင်းပင် မကိုင်ခဲ့ ရသော ရခိုင်လူမျိုးများမှာ ကမ္ဘာကျော် လူသတ်သမားတွေလို ဖြစ်ခဲ့ သည် ။ လက်နက်ကိုင်ထားသော စစ်တပ်ကလည်း တချက်မျှ မပစ်ခတ်ခဲ့ ရဘဲနှင့် လူသတ် ၊ မုဒိမ်းကျင့် ၊ ဓါးပြတိုက်သ
ူများအဖြစ် စွပ်စွဲခံခဲ့ ရသည် ။ ယင်းသို့စွပ်စွဲမှုများစွာဖြင့် နာမည်ဆိုးဖြင့်ကျော်ကြားသော ရခိုင်ပြည်နယ်ကို ကုလသမ္မဂမှ တပ်များ မစေလွှတ်ခင် နိုင်ငံတကာက သံအမတ်တွေ စုလာကြသည်လား မပြောတတ် ။ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ လူ့ အခွင့်အရေးစုံစမ်း စစ်ဆေးရေး အစီရင်ခံစာ တင်သွင်းသူ ကင်တာနားပါ လာသည် ။ သူတို့ တွေကို မြန်မာအစိုးရမှ ရန်ကုန်ရှိ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဟောင်းရုံးခမ်းမမှာပင် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ ပေးခဲ့ သည် ။
နောက် ရခိုင်ပြည်နယ်သို့ဒုက္ခသည်များနှင့် မျက်နှာစုံညီ တွေ့ ဆုံနိုင်ရန် ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံအစိုးရက စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ သည် ။ ရခိုင်ပြည်နယ်အနှံ့ ဒုက္ခသည်များရှိရာ စခမ်းတိုင်းတွင် သူတို့ တွေ တွေ့ ဆုံကြသည် ။ ပြီးနောက် နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီး ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီး သိန်းဋ္ဌေး နှင့် သံတမန်များ ၊ ကုလသမ္မ၈ အထူးကိုယ်စားလှယ် Mr Tomas Qjea Quintanas ၊ ရခိုင်ပြည်နယ် ၀န်ကြီးချုပ်နှင့် ပြည်နယ်အစိုးရ၀န်ကြီးများသည် ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရရုံး၌ ကျင်းပသည့် ရခိုင်ပြည်နယ် သံတမန်လေ့လာရေး ခရီးစဉ်အပေါ် ပြန်၍သုံးသပ်သည့် အစည်းအဝေး ကို သြဂုတ်လ-၁-ရက်နေ့ တွင် ပြုလုပ်ကြသည် ။
အင်ဒိုးနီးရှား ၊ ကမ္ဘောဒီးယား ၊ ဘရာဇီး ၊ ကူဝိတ်၊ လာအို ၊ ဆော်ဒီအာရေဗီးယား ၊ ပါကစ္စတန် ၊ အီဂျစ် ၊ အိန္ဒိယနိုင်ငံ ၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံများမှ သံတမန်တို့ က ယခုလို သုံးသပ်ကြသည် ။ မိမိတို့ ၏ ခရီးစဉ်မတိုင်မှီ ပြည်ပသတင်ဋ္ဌါနများနှင့် မီဒီယာအမျိုးမျိုးမှတဆင့် သိရှိခဲ့ ရသည့်အတည်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိသော အကြောင်းအရာနှင့် သတင်းအချက်အလက်များသည် ဇူလိုင်လ-၃၀ရက်တွင် ပြုလုပ်ခဲ့ သော သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပါ အချက်အလက်များ ၊ ယခုမြေပြင်တွင် ကိုယ်တွေ့တွေ့ မြင်ခဲ့ ရသော ပကတိ လက်ရှိအခြေအနေမှန်များသည် လွန်စွာကွာဟလျှက်ရှိပါကြောင်း ၊ မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရမှ ရိုးသားပွင့်လင်းစွာ ကိုယ်တွယ်ဖြေရှင်း ဆောင်ရွက်နေသည်ကို တွေ့ မြင်ရ၍ အထူးပင် လေးစားဂုဏ်ယူကြရပါကြောင်း သုံးသပ်ပြောဆိုတင်ပြခဲ့ ကြသည် ။
သံတမန်များက သူတို့ နိုင်ငံအစိုးရထံတွင် အဖြစ်ပျက်အမှန်များကို တင်ပြသွားပါမည်ဖြစ်ကြောင်းလည်း ပြောဆိုသွားသည်ကို တွေ့ ရသည် ။ ထို့ ကြောင့် ကမ္ဘာ့အလယ်တွင် ကမ္ဘာကျော် လူသတ်သမားလို နာမည်ဆိုးဖြင့် ကျော်ကြားခဲ့ သော ရခိုင်လူမျိုးများနှင့် တပ်မတော်သည်လည်း နိုင်ငံတကာ အစိုးရများ၏ အလယ်တွင် သိက္ခာမကျ ဖြစ်ကြရပါပြီ ။ ဗြိတိန်နိုင်ငံတွင် မွတ်ဆလင်ဘာသာဝင်တွေ မြန်မာနိုင်ငံမှာ -၂၀၀၀၀- ကျော် သေဆုံးနေရပါသည်ဟု စာတမ်းထိုးကာ ဆန္ဒပြနေသောသူတို့ သည်လည်း ယခုလို နိုင်ငံတကာ သံတမန်များ၏ အမြင်များကို သိရှိသွားကြပြီဖြစ်ရာ ဆက်၍ ကမ္ဘာကို လိမ်ညာမရမှန်းတော့ သိလောက်ပါပြီ ။
နိုင်ငံတကာသံတမန်များနှင့် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ လူ့ အခွင့်အရေး ကိုယ်စားလှယ် သောမတ်စ် ကင်တာနားတို့ မှာ ယခုမှ ပြည်ပမီဒီယာတို ၏ မသာမှုများကို မျက်ဝါးထင်ထင် တွေ့ မြင်ကြရပါပြီ ။ သူတို့ တွေ လုပ်၍ ကမ္ဘာတည်သရွေ့ ကျွန်ဘ၀လုံးလုံးဖြစ်သွားမည့် လူမျို၍ လူမျိုးပျောက်သွားမည့် အရေးကို ယခုတော့ မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရနှင့် တကွ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးပေါင်းစုံတို့ မှ အသက်ပေးကာကွယ် စောင့်ရှောက်ခဲ့ ကြပါပြီကော ။ ဤနေရာမှနေ၍ သမ္မတကြီး ဦးသိန်းစိန်ကိုလည်း အထူးပင်လေးစား ကျေးဇူးတင်ပါကြောင်း ပြောကြားလိုသည် ။ ဘဘဦးတင်ဦးနှင့် -၈၈- ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ကိုကိုကြီး တို့ ကိုလည်း အထူးပင် ကျေးဇူးဥပကာရ ပြုပါကြောင်း မှတ်တမ်းတင်ထားပါကြောင်း ပြောကြားလိုပါသည် ။ တချိန်တည်းမှာပင် နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တဦးပီပီ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ နယ်ခြားချင်းကပ်လျှက်ရှိနေသော နှစ်နိုင်ငံမှာ နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်မှုများ ရှိနေတတ်၍ ခိုးဝင်မှုများ ၊ လျော့ရည်းနေသော တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုများ ၊ လာဘ်စားမှုများကို ပပျောက်သွားရန် ဆောင်ရွက်ရမည် ဆိုသော စကားကိုလည်း လေးလေးနက်နက် ထောက်ခံသည် ။ စင်စစ်အားဖြင့် ယခုအချိန်တွင် ပြည်သူ့ လွှတ်တော်မှ ဥပဒေတရပ်ဖြင့် ဆောင်ရွက်ရမည့် လူဝင်မှု ဥပဒေကို ရေးဆွဲ ရမည်ဖြစ်သည် ။ ခိုးဝင်လာသူများအား နယ်နှင်ဒဏ်ပေးရမည့်သူများကို စိစစ် ဆောင်ရွက်ရန် လိုနေပြီဖြစ်သည် ။ မည်သို့ ပင်ဆိုစေ ခုတော့ ပြည်ပမီဒီယာများ၏ မသာမာမှုများကို သံတမန်များ ၊ အစိုးရများ ၊ ကုလသမ္မဂမှ တာဝန်ရှိသူများမှာ မျက်ဝါးထင်ထင် မြင်တွေ့ သွားကြပါလေပြီ ။။။။။။။။
နိုင်ငံတနိုင်ငံ၏ ဖွဲ့ စည်းအုပ်ချုပ်ပုံကို ပြောင်းပေးသင့်သည်ဟု ကုလသမ္မဂ လူ့ အခွင့်အရေး ကိုယ်စားလှယ်က ပြောပိုင်ခွင့်ရှိသလား
ကုလသမ္မဂဆိုင်ရာ မြန်မာနိုင်ငံ အထူးကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် ဆောင်ရွက်နေသူ မစ္စတာသောမတ်စ်အိုဟေး ကင်တားနားက သြဂုတ်လ-၄-ရက်နေ့ တွင် မင်္ဂလာဒုံလေဆိပ်မှာ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ ပြုလုပ်ပေးခဲ့ သည် ။ လူ့ အခွင့်အရေးတာဝန်ခံက သူပြောချင်ရာပြောပြီး သတင်းထောက်များ၏ လူ့ အခွင့်အရေးကိုတော့ ဘာမှ မလေးစားဘဲ မေး ခွန်း(၄ ) ခုသာ မေးစေသည် ။ ပြီးတော့ သတင်းထောက်များ မေးခွန်းထုတ်သည်ကို မဖြေဆိုဘဲနေခဲ့ သည်ဟု သတင်းများတွင် ဖတ်ရသည် ။ လူ့ အခွင့်အရေးဆိုသည်မှာ လွပ်လွပ်စွာ ထုတ်ဖေါ်ခွင့် ရှိပါသည် ။ ပြောချင်ရာပြောပြီး ဟိုမမေးရ ၊ ဒီမမေးရ ဆိုသည်မှာ လူ့ အခွင့်အရေးစံနုံးကို မှေးမှိန်စေသည် ။
သူနှင့်အတူ ပါလာသော နိုင်ငံတကာ သံတမန်များမှာ ပြည်ပမီဒီယာများ၏ သတင်းအမှားကြောင့် ယခုလို ရခိုင်ပြည်နယ်၏ ပကတိဖြစ်ပျက်နေသော အမြင်များနှင့် များစွာကွာခြားနေပါသည်ဟု ထုတ်ဖေါ်ပြောဆိုသွားကြသည် ။ သူတို့ပြောဆိုသော များစွာကွာခြားသည်ဆိုခြင်းမှာ အဓိကအားဖြင့် ( So call Rohngyas ) များကို ပြောဆိုခြင်း ။ အကြမ်းဖက်သူများမှာ ဘင်္ဂလီများသာဖြစ်နေခြင်း ၊စစ်တပ်မှ ဘင်္ဂလီအမျိုးသမီးများအား မုဒိမ်းကျင့် ၊ လူသတ်ခြင်းမှာ မဟုတ်ခြင်း နှင့် နေအိမ်များကို မီးရို့ခြင်းမှာ ဘင်္ဂလီများသာဖြစ်ကြောင်း ၊ ပြည်ပမီဒီယာများမှ စွပ်စွဲချက်များနှင့် လုံးဝဆန့် ကျင်ဖက်ဖြစ်ကြောင်းတို့ ကို ပြောဆိုခြင်းဖြစ်သည် ။
အတူတူ ပါလာသော သံတမန်များက ယင်းသို့ အမြင် ရှိပါလျှက်ကယ်နှင့် ကင်တာနားက မည်သည့်အတွက်ကြောင့် ယင်းသို့အမြင်မရှိရလေသနည်း ။ ပြီးတော့ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပဋိပက္ခများကို ဆက်လက်ကြီးထွားအောင် ဘာကြောင့်များ သွေးလန့် ပေးလေသနည်းဆိုသည်မှာ စဉ်းစားစရာတွေဖြစ်လာသည် ။ ကုလသမ္မဂ၏ လူ့ အခွင့်အရေးကိုယ်စားလှယ်က မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဖွဲ့ စည်းအုပ်ချုပ်ပုံအခြေခံဥပဒေကို ပြင်ဆင်ရေးသားရမည်ဟု တိုက်တွန်းရအောင် သူက မြန်မာနိုင်ငံမှ ပြည်သူ့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လည်း မဟုတ် ။ မြန်မာနိုင်ငံ၏ နိုင်ငံတော်ဖွဲ့ စည်းအုပ်ချုပ်ပုံအခြေခံဥပဒေမှာ မြန်မာနိုင်ငံသားများအတွက်သာ ဖြစ်သည်ကို သူဘာကြောင့်များ နားမလည်ဖြစ်နေရသနည်း ။ ဥပမာအားဖြင့် အမေရိကပြည်ထောင်စုတွင် နယ်စပ်ချင်းကပ်နေသည့် မက္ကဆီကို နိုင်ငံမှ ခိုးဝင်သော မက္ကဆီကို နိုင်ငံသားများကို နေ့ စဉ်ပင် အမေရိကပြည်ထောင်စု၏ တိုင်းရင်းသားအဖြစ် အသိအမှတ် မပြုပေးသည်ကို နယူးယောက်မြို့ မှာ နေထိုင်သော ကင်တားနားက နားလည်လိမ့်မည်ထင်သည် ။ ကင်တာနားက မြန်မာနိုင်ငံကိုသာ ပြောရဲပြီး အမေရိကပြည်ထောင်စု သမတ အိုဘားမားရော ပြည်သူတွေကို ယင်းသို့အမေရိကပြည်ထောင်စု၏ နိုင်ငံတော်ဖွဲ့ စည်းအုပ်ချုပ်ပုံ အခြေခံဥပဒေကို ပြောင်းလဲ ပေးရမည်လို့ပြောရဲပါ့မလား ။ ချက်ချင်း သတင်းစားများမှ လွပ်လွပ်လပ်လပ် ရေးပြီး ဆော်ပလော်တီးလိုက်ကြမည်မှာ လွယ်မည့်ပြသနာမဟုတ် ။ ပြီးတော့ သူကိုယ်တိုင် လာရောက် စစ်ဆေးခဲ့ ပါလျှက်နှင့် စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး အဖွဲ့ စေလွှတ်ပေးရန်လိုသည်ဟု ထပ်မံသွေးထိုးလှုံ့ ဆော်ခဲ့ သည် ။ အဓိကမှာ သူတို့ ၏ ဖမ်းဆီးခံထားရသော တရားခံ ဖြစ်နေသည့် -UNHCR -မှ ၀န်ထမ်းများနှင့် NGOs ၀န်ထမ်းများကို ဖမ်းဆီးထား၍ ယင်းသို့စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့စေလွှတ်သင့်သည်ဟု ပြောဆိုသွားခြင်းဖြစ်သည် ။ သူတို့ အား ဖမ်းဆီးထားသည်မှာ အခြေအမြစ် မရှိဟု သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ ပြောဆိုသွားခြင်းသည် အစိုးရ၏ မျက်နှာကို ခြေထောက်နှင့် ပိတ်ကန်သွားခြင်းဖြစ်သည် ။ သူက အချုပ်ခန်းထဲက တရားခံ စကားကိုသာ ယုံကြည်လက်ခံပြီး သမ္မတ၊ ၀န်ကြီး များ ပြောသော စကားကို လက်မခံသော အောက်တန်းကျလှသည့် သံတမန်အဆင့်ဖြစ်နေသည် ။ ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတိုးတက်ရေးပါတီနှင့်လည်း မတွေ့ ဆုံခဲ့ ဟု ကြားရသည် ။ ကုလသမ္မဂဆိုသည်မှာ ဂုဏ်ကြက်သရေရှိလှသော နိုင်ငံတကာအစိုးရများ၏ ဋ္ဌါနချုပ်ဖြစ်သော် လည်း တခါက ကုလသမ္မဂ အတွင်းရေးမှူးချုပ် မစ္စတာ ကိုဖိအာနန်၏ သားဖြစ်သူမှာ ဖခင်ဖြစ်သူ၏ သြဇါကို သုံးပြီး လာဘ်ငွေစားခဲ့ ၍ ပြသနာအကြီးအကျယ် ဖြစ်ခဲ့ ပြီးနောက် မစ္စတာကိုဖိအာနန်လည်း ပလ္လင်ပေါ်မှ ဆင်းခဲ့ ရဖူးသည် ။ ယခုလည်း ကင်တားနားသည် အခြားသံတမန်များ၏ အမြင်နှင့် ကွဲပြားစွာ ရှိနေသည်ကို သံသယထားကာ ဆက်ဆံရမည့် ပုဂိုလ်ဖြစ်နေပြီ ။ တိတိကျကျ ပြောရလျှင် သူ အား မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ခန့် ထားပေးသော ကိုယ်စားလှယ်ရာထူးကို လက်မခံကြောင်း မြန်မာအစိုးရမှ ကြေညာပေးရန်လိုပြီ ။
မြန်မာနိုင်ငံ၏ နိုင်ငံတော်ဖွဲ့ စည်းအုပ်ချုပ်ပုံအခြေခံဥပဒေအတိုင်း သမ္မတမှ ကြေညာထားခြင်းကို နိုင်ငံခြားသား တဦးက အထူးသဖြင့် ကုလ၀န်ထမ်းတဦးက ပြောဆိုဝေဖန်ခြင်းသည် နိုင်ငံတနိုင်ငံ၏ အချုပ်အချာအာဏာကို ထိပါး စော်ကားလာခြင်းဖြစ်သည် ။ ပဋိပက္ခဖြစ်နေသည်ကို ကြားဝင်ဖြန်ဖြေပေးခြင်းဖြင့် ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးကို ဆောင်ရွက်ပေးရန် ကုလတာဝန်ရှိသူများကသာ ပြုလုပ်သင့်သည် ။ ယခုဖြစ်နေသော ရခိုင်ပြည်နယ်မှ ပြသနာသည် ရမ်းဗြဲမှ မိန်းခလေးငယ်တဦးအား သတ်ဖြတ်ခြင်းကြောင့် ရှည်လျှားထွေပြား ဖြစ်လာသော ပြသနာမဟုတ်၊ တောင်ကုတ်မှာ ဖြစ်လာသော ပဋိပက္ခကြောင့် ဖြစ်လာနေသည့် မငြိမ်းသော ပြသနာမဟုတ် ။ အချိန်မရွေး ထတောက်လာမည့် မီးတောက်ကို ရခိုင်လူမျိုးတို့ သည် စောစီးစွာ သိရှိထားကြပြီးဖြစ်သည် ။
ယခုအချိန်ထိ ဘင်္ဂလီလူမျိုးတို့ ၏ အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်နေမှ သတင်းများကို ကြားနေရသေးသည် ။ ဤဆောင်းပါးရေးနေချိန်မှာ ကျောက်တော်မြို့ နယ်တွင် အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်နေသည်ဆိုသော သတင်းကြားရသည် ။ မြန်မာနိုင်ငံ ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဋ္ဌါနသည် ယခုအချိန်ထိ တုံဏှိဘာဝေ နေရလေသနည်း ။ ကမ္ဘာအရပ်ရပ်တွင် သတင်းအမှားများကို ဖြန့်ချီရေးသားနေခြင်းကို မြန်မာနိုင်ငံမီဒီယာများက ဘာကြောင့်များ ရေးခွင့် တုန့် ပြန်ခွင့် မရကြနည်း ။
ကင်တားနားရဲ့ မစ်ရှင်ဟာ ပြန်ပြီးတော့ မေးခွန်းထုတ်စရာ ဖြစ်လာ
လူ့အခွင့်အရေးလို့ပြောရင် မူရင်းဒေသခံ ရခိုင်တွေကလည်း လူတွေပါ၊ အဲဒီရခိုင်တွေရဲ့ လူ့အခွင့်အရေးကို ထည့်သွင်းပြောကြားခြင်း မရှိဘဲနဲ့ ရိုဟင်ဂျာကိစ္စကိုပဲ ပြောနေမယ် ဆိုရင်တော့ ကင်တားနားရဲ့ မစ်ရှင်ဟာ ပြန်ပြီးတော့ မေးခွန်းထုတ်စရာ ဖြစ်လာလိမ့်မယ်`` လို့ ဦးကိုကိုကြီးက ပြောပါသည် .............
The Voice Weekly နိုင်ငံသား ဥပဒေ ပြန်လည်ပြင်ဆင်ရန် လိုအပ်ဟု ကင်တားနား ပြောကြား
ရိုဟင်ဂျာ အမည်ခံများ အရေးဖြေရှင်းရန် မြန်မာနိုင်ငံတွင် နိုင်ငံသား ဥပဒေကို ပြန်လည်ပြင်ဆင် ရေးဆွဲရန် လိုအပ်နေပြီ ဖြစ်ကြောင်း မြန် မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ကုလသမဂ္ဂလူ့အ ခွင့်အရေး အထူးကိုယ်စားလှယ် သောမတ်စ် အိုဟေး ကင်တားနားက မင်္ဂလာဒုံလေဆိပ်၌ သြဂုတ်လ ၄ရက်နေ့ က ပြုလုပ်သော သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲ တွင် ပြောကြားခဲ့သည်။
"ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးတွေ နိုင်ငံသား မဟုတ်ဘူးလို့ ငြင်းဆိုခံရမှုတွေ၊ ခွဲခြားဆက်ဆံခံရတာတွေ၊ လွတ်လပ်စွာ လှုပ်ရှားခွင့် မရမှုတွေ အတွက် ၁၉၈၂ နိုင်ငံသား ဥပဒေကို ပြင်ဆင်သင့်တယ်။ သူတို့တွေကို နိုင်ငံတကာ လူ့အခွင့်အရေး အဆင့်နဲ့ တပြေးညီ ဖြစ်အောင် လုပ်ပေးရမယ်" ဟု ၄င်းက ဆိုသည်။
အစိုးရအနေဖြင့် လူ့သားချင်းစာနာထောက်ထားသော အကူညီများပေးအပ်ရန်လိုအပ်သည့်အပြင်၊ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး ခိုင်မာလာရန်နှင့် တရားစီရင်ရေး၊ ဥပဒေပြုရေး တို့တွင် လူ့အခွင့်အရေးနှင့် ပက်သက်ပြီး ပိုမိုအလေးပေး ဆောင်ရွက်သွား ရန်လိုအပ်ကြောင်း သောမတ်စ် အိုဟေးကင်တားနားက ထပ်မံ တိုက်တွန်းသွားသည်။
နိုင်ငံတော် အစိုးရ အနေဖြင့် ရခိုင်တိုင်းရင်းသား လူ့အဖွဲ့အစည်းများ အတွက်လည်း လူသားချင်းစာနာထောက်ထားသည့် အကူညီများပေးရန် လိုအပ်ကြောင်း၊ အကူအညီများ လိုအပ်နေသော အချိန်မျိုးတွင် လိုအပ်သည့် အကူအညီများကို အလျင်အမြန်ရရှိနုိုင်ရန် လုပ်ဆောင်ပေးသွား ရန် အရေးကြီးကြောင်း ၄င်းက ထပ်မံ အကြံပြုသည်။
ခိုးဝင်လာသော ရိုဟင်ဂျာ အမည်ခံများသည် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးမဟုတ်ကြောင်း၊ မိမိတိုင်းရင်းသားများကိုသာ တာဝန်ယူ သွားမည်ဖြစ်ပြီး ခိုးဝင်လာသည့် ရိုဟင်ဂျာများကို UNHCR (ကုလသမဂ္ဂ ဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာ မဟာမင်းကြီးရုံး) သို့ အပ်နှံပြီး ဒုက္ခသည် စခန်းအဖြစ်ထားရှိကာ UNHCR ကကျွေးမွေး စောင့်ရှောက်ထားရန်နှင့် တတိယနိုင်ငံများက လက်ခံမည်ဆိုပါက ပို့ပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း နိုင်ငံတော် သမ္မတကြီး ဦးသိန်းစိန်က ဇူလိုင်လ ၁၁၇က်နေ့တွင် ကုလသမဂ္ဂ ဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာ မဟာမင်းကြီး Mr. Antonio Guterres ကို ပြောကြားခဲ့သည်။
ရိုဟင်ဂျာသည် မြန်မာနိုင်ငံရှိ တိုင်းရင်းသားလူမျိုး ၁၃၅မျိုးတွင် လုံးဝ ပါဝင်ခြင်းမရှိကြောင်း၊ ရိုဟင်ဂျာကို တိုင်းရင်းသား အဖြစ် လက်ခံရန် လုံးဝ မဖြစ်နိုင်ကြောင်း လူဝင်မှု ကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့ အင်အားဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးခင်ရီက ဇူလိုင်လ ၃၀ရက်နေ့က နိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီးဌာနတွင်ပြုလုပ်သော ရခိုင်ပြည်နယ် ပဋိပက္ခ အခြေအနေများနှင့် ပတ်သက်၍ ပြုလုပ် သော သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင် သတင်းစာဆရာများကို တရားဝင်ပြောကြားခဲ့သည်။
သောမတ်စ် အိုဟေး ကင်တားနား၏ တိုက်တွန်းချက်သည် ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သော ပဋိပက္ခများကို တည်ငြိမ် အောင် ဖြေရှင်းသော နည်းလမ်း မဟုတ်ရုံသာမက ဆူပူမှု ဖြစ်အောင် သွေးထိုးလှုံဆော် သကဲ့သို့ ဖြစ်နေကြောင်း၊ ယင်း တိုက်တွန်းချက်သည် တိုင်းရင်းသား လူမျိုးများ၏ အခွင့်အရေးနှင့် နိုင်ငံတော် ဥပဒေကို ဆန့်ကျင်နေပြီး နိုင်ငံတော်၏ အချုပ်အခြာ အာဏာကို ထိပါးလာစေသော တိုက်တွန်း ချက်သာဖြစ်ကြောင်း ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများ တိုးတက်ရေးပါတီမှ အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူး ဦးဦးလှစောက ဝေဖန်သည်။
“လူ့အခွင့်အရေး ဆိုတဲ့ စကားတစ်ခုတည်းနဲ့ ရခိုင်တစ်မျိုးသားလုံးရဲ့ မျိုးတုံးသွားမယ့် ကိစ္စကတော့ လုံးဝ မဖြစ်သင့်ဘူး။ ကင်တားနား အနေနဲ့ တိုင်းရင်းသား လူမျိုးများရဲ့ လူ့အခွင့်အရေးကို လေးစားဖို့လိုတယ်“ ဟု ၄င်းက သုံးသပ်သည်။
မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ကုလသမဂ္ဂ လူ့အခွင့်အရေး အထူးကိုယ်စားလှယ် သောမတ်စ် အိုဟေး ကင်တားနားသည် လူ့အခွင့် အရေးချိုးဖောက် မှုများကို လေ့လာရန် မြန်မာနိုင်ငံ သို့ ဇူလိုင်လ ၃၀ရက်နေ့တွင် ရောက်ရှိခဲ့ပြီး သြဂုတ်လ ၄ရက်နေ့တွင် မြန်မာနိုင်ငံမှ ပြန်လည် ထွက်ခွါ သွားခဲ့သည်။
နိုင်ငံတော် သမ္မတကြီး၏ ရိုဟင်ဂျာ အရေးကို ရဲ့ရင့် ပြတ်သားစွာ ပြောကြားချက်ကို ထောက်ခံကြောင်း၊ UNHCR မဟာ မင်းကြီး ပြောကြားသော ရိုဟင်ဂျာများနှင့် အတူယှဉ်တွဲ နေထိုင်ရေး ပြောကြားချက်အား ကန့်ကွတ် ရှုတ်ချသော အနေဖြင့် ရန်ကုန်မြို့ရှိ ကုလသမဂ္ဂ ဆိုင်ရာ မဟာမင်းကြီး ရုံးရှေ့တွင် သြဂုတ်လ ၃ရက်နေ့က ဆန္ဒ ပြပွဲဖြစ်ပွားခဲ့သည်။
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 8/05/2012 1 အကြံပြုခြင်း
လန်ဒန် အိုလံပစ် ၂၀၁၂ ပြိုင်ပွဲဝင် မနီလာစန်း
လန်ဒန် အိုလံပစ် ၂၀၁၂ ပြိုင်ပွဲဝင် မနီလာစန်းဟာ ဒီကနေ့ သြဂုတ် ၅ မှာ အမျိုးသမီး မာရသွန်ပြိုင်ပွဲမှာ ၀င်ရောက် ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ပါတယ်။ နိုင်ငံစုံက အပြေးသမား ၁၁၈ ယောက် ၀င်ပြိုင်ခဲ့ပြီး ၁၀၇ ယောက် ပန်းဝင်အောင် ပြေးနိုင်ခဲ့တာမှာ မနီလာစန်းက ၁၀၅ ယောက်မြောက် နေရာကနေ ပန်းဝင်ခဲ့ပါတယ်။ မာရသွန်ခရီးအတွက် မိုးတွေရွာလို့ အေးနေတဲ့ ချမ်းနေတဲ့ ကြားမှာ မနီလာစန်းက သုံးနာရီ လေးမိနစ်နဲ့ နှစ်ဆယ့်ခုနစ်စက္ကန့်ကြာအောင် ပြေးခဲ့ရပါတယ်။
အကြောင်းတိုက်ဆိုင်လို့ ရိုဟင်ဂျာ တွေက မူဆလင်ဖြစ်ပြီး ရခိုင်တွေက ဗုဒ္ဓဘာသာ ဖြစ်နေတာသာ ဖြစ်ကြောင်းအင်ဒိုနီးရှားသမ္မတ ကပြော
အနောက်ဂျားဗား ရှိသူ့ ရဲ့နေအိမ်မှာ ကျင်းပတဲ့ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ သမ္မတ ယူဒိုယူနို က သူ့ အနေနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ ရခိုင်ပြည်နယ်က အခြေအနေ ကို တတ်နိုင်သမျှ မှန် မှန်ကန်ကန် ပြည့်ပြည့်စုံစုံ နဲ့ ဘက်မလိုက်ဘဲ ကြိုးစား ရှင်းပြနေတာဖြစ်ကြောင်းလည်း သတင်းထောက်တွေကို ပြောပါတယ်၊
ရိုဟင်ဂျာတွေဟာ ဘင်ဂလားဒေ့ရှ် ဇာတိဖြစ်ကြောင်း၊ ဒါပေမဲ့ မျိုးဆက်
လေးဆက်လောက်နေထိုင် လာတဲ့ သူတို့ ကို မြန်မာ အစိုးရက တိုင်းရင်းသား ၁၃၅ မျိုးထဲမှာ ထဲ့သွင်းမှု မရှိသေးဘူး လို့လည်းပြော ပါတယ်။
ဆိုကြပေမဲ့ တဖက်မှာလည်း ရိုဟင်ဂျာတွေဟာ ကုလသမဂ္ဂ ရဲ့ အကူအညီ အထောက်အပံ့ ပိုရနေတယ်လုို့ ရခိုင်တွေက သတိမူ သဘောပေါက် ထားကြောင်းလည်း ပြောဆိုပါတယ်၊
Article from Morning Post Journal
Sunday, 05 August 2012 10:36
ဒုသမ္မတ ဒေါက်တာ စိုင်းမောက်ခမ်း ဒုတိယအကြိမ်အဖြစ် ရခိုင်ပြည်နယ် ပဋိပက္ခအား လေ့လာရေးခရီးစဉ်အတွင်း အထူးရဟန်ယာဉ် ၂ စီးဖြင့် စစ်တွေမှ ဘူးသီးတောင်-မောင်တော-မြောက်ဦး-မဟာမုနိ-ကျောက်တော်မှ စစ်တွေတွင် ယမန်နေ့က ညအိပ်ရှိနေခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။ ဒေါက်တာ စိုင်းမောက်ခမ်းနှင့်အတူ ရခိုင်ပြည်နယ်တိုင်းမှူး ဗိုလ်မှူးချုပ် ဦးကိုကိုနိုင်၊ ရခိုင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီး ဦးလှမောင်တင်၊ ဒုဝန်ကြီး (၁၀)ဦးခန့်၊ ကာကွယ်ရေးဒုဝန်ကြီး ဦးလှမြင့် အပါအ၀င် နယ်စပ်ရေးရာ၊ ပညာရေးနှင့် ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးများ လိုက်ပါလာကြောင်းနှင့် မောင်တောမြို့နယ်မှ ဒုက္ခသည်များအား အကူအညီပေးရန် ပြောဆိုခဲ့ကြောင်း နီးစပ်သူတစ်ဦးက ပြောသည်။ ဒေါက်တာ စိုင်းမောက်ခမ်းဦးဆောင်သော အဖွဲ့သည် စစ်တွေမြို့လေဆိပ်သို့ နံနက်ပိုင်းတွင် ရောက်ရှိခဲ့ပြီး မောင်တောမြို့သို့ ၁၁ နာရီတွင် ဆိုက်ရောက်လာကာ နေ့လည် ၁ နာရီတွင် ဘူးသီးတောင်-မြောက်ဦးမြို့ မြို့နယ်များမှတဆင့် လည့်လည်သွားခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ဆိုသည်။ " ဒေသခံများနဲ့ ဒုက္ခသည်တွေကို တွေ့ဆုံပြီး အားပေးစကားတွေ ပြောခဲ့ပါတယ်၊ ကျွဲနွားတွေ ဆုံးရှုံးသွားမှုအပေါ် လယ်ထွန်စက်တွေ ကူညီဆောင်ရွက်ပေးဖို့ ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်၊ ဒေသခံတွေကို ပိုမိုတိုးတက်တဲ့ ပြန်လည်ထူထောင်ရေးတွေ လုပ်ပေးဖို့ ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်၊ အကူညီတွေပေးအပ်ခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ " ဟု နီးစပ်သူတစ်ဦးက ပြောသည်။ ဒေါက်တာ စိုင်းမောက်ခမ်း မောင်တောမြို့- အလယ်သံကျော် ခရီးစဉ်တွင် ခြားစားမှုဖြင့် ပြောင်းရွေ့အရေးယူ ခံနေရသော နစကကွပ်ကဲရေးမှူး ဦးအောင်ကြီး နေရာသို့ ဇူလိုင် ၃၀ ရက်နေ့က ပြောင်းရွေ့လာသူ ဗိုလ်မှူးကြီး ဦးအောင်နိုင်ဦး(၄၀)နှစ် အနီးကပ် လိုက်ပါခဲ့ပြီး လုံခြုံရေးများ တာဝန်ယူပေးခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။ မြန်မာနိုင်ငံတော်မှ ခြစားမှုဖြင့် အရေးယူထားသော ဦးအောင်ကြီးထံမှ မြေပေါ် ကျပ်သိန်း ၅၀၀၀ အား သိမ်းဆည်းထားပြီးဖြစ်ကြောင်း၊ ၎င်းထံမှ မြေအောက်ဘဏ္ဍာများအား သိမ်းဆည်းနိုင်မှုများလည်းရှိကြောင်းနှင့် ၎င်းအား အရေးယူမည် အခြေအနေကို မသိရှိရသေးကြောင်း မောင်တောမြို့နယ် နစကသတင်းရပ်ကွက်များက ဆိုသည်။ ဗိုလ်မှူးကြီး ဦးအောင်နိုင်ဦးမှာ သံတွဲမြို့နယ်မှ ရခိုင်အမျိုးသားတဦးဖြစ်ပြီး မောင်တောမြို့နယ် ဒေသခံများအနေဖြင့် ပြန်လည်ထူထောင်ရေး လုပ်ငန်းများတွင် အားပေးအားမြောက် ပြုလာနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ယုံကြည်နေကြသည်ဟု မြို့ခံတစ်ဦးက ပြောသည်။ " ဒုသမ္မတကြီးက အေးဆေးတည်ငြိမ်တဲ့ လူရိုးတစ်ဦးလို့ မြင်ပါတယ်၊ သူပြောခဲ့တဲ့အတိုင်း အမှန်အတိုင်း အကူအညီတွေ ရမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်၊ သူကြားနေတာနဲ့ ကိုယ်တိုင်ကြည့်ရတာ လွဲချော်မှုတွေ အများကြီးတွေ့နေရတယ်လို့ သူသုံးသပ်ပါတယ်၊ သူအမှန်ကို ကူညီဖို့ အတန်တန်ပြောခဲ့ပါတယ်။ " ဟု မောင်တောမြို့နယ်မှ အနီးကပ် လုံခြုံရေး အရာရှိတစ်ဦးက ပြောသည်။ ဒေါက်တာ စိုင်းမောက်ခမ်း အနေဖြင့် ပဋိပက္ခဖြစ်ပွားသည့် အဖြစ်အမှန်အတိုင်း သိရှိနိုင်ရန်၊ ဒုက္ခရောက်နေကြသော ဒုက္ခသည်များ၏ လတ်တလော အကူအညီလိုအပ်မှုများကို ဖြေရှင်းပေးရန်နှင့် ပြန်လည်ထူထောင်ရေး လုပ်ငန်းများကို စနစ်တကျ လုပ်ဆောင်နိုင်ရန် လေ့လာစစ်ဆေးဖို့ ရခိုင်ပြည်နယ်သို့ ရောက်ရှိလာခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။ ၎င်းအနေဖြင့် ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း ပဋိပက္ခဖြစ်ပွားသည့် အမှန်အတိုင်း အခြေအနေများကို သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်၏ ရှေ့ပြေးအနေဖြင့် ရောက်ရှိလာကြောင်း ဖြစ်ကြောင်းနှင့် ခုရက်ပိုင်းအတွင်း ဦးသိန်းစိန် လာရောက်စစ်ဆေးနိုင်ဖွယ် အခြေအနေများ ကျန်ရှိနေသေးကြောင်း သိရှိရသည်။ မောင်တောမြို့နယ်မှ နိုင်ငံရေးဝါရင့်တစ်ဦးက " UNကိုယ်စားလှယ် ကင်တင်းနား ရခိုင်ပြည်နယ်ကို လာရောက်လေ့လာတာဟာ သီးသန့် ကျူးကျော်ဝင်ရောက်နေထိုင်သူ မူဆလင်အရေးကို တဖက်သတ် စိတ်ဝင်တစား ဆောင်ရွက်ခဲ့တာပါ၊ ရခိုင်ပြည်နဲ့ ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ ပဋိပက္ခအဖြေမှန်အတွက် မည်သို့မှအကျိုးမရှိပေ၊ တခါတည်းမှာ မြန်မာပြည်နဲ့ လူထုတွေအတွက်ပါ အကျိုးကိုယုတ်စေမဲ့ ဖြစ်ရပ်တွေ ပေါ်လာနိုင်ပါတယ်။ " ဟု ဒုသမ္မတ ဒေါက်တာ စိုင်းမောက်ခမ်း မောင်တောမြို့တွင် ရှိနေစဉ် ဖုံးမှတဆင့် ထုတ်ဖေါ်ပြောဆို လိုက်သည်။ ဒုသမ္မတ ဒေါက်တာ စိုင်းမောက်ခမ်းသည် ရခိုင်ပြည်နယ်သို့ ၂ ရက်တာခရီးစဉ် လေ့လာရန် လာရောက်ခြင်းဖြစ်သည်။ စစ်တွေမြို့တွင် ပဋိပက္ခဖြစ်စဉ်နှင့် ဒုက္ခသည်အခြေအနေများကို စုံစမ်းမေးမြန်းလေ့လာ၍ ပြန်သွားခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။ ၎င်းက " ခုဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ အကြမ်းဖက်မှုတွေဟာ ဘယ်ကနေ ဆင်းသက်လာတယ်၊ အကြမ်းဖက်တာဟာ ဘယ်နေရာကိုထိ ထိခိုက်တယ်ဆိုတာကို လူတိုင်း အထူးသဖြင့် အစိုးရအဖွဲ့တွေ သိမှာပါ၊ ပြီးတော့ ဒေသအတွင်းမှာ ခြစားမှု၊ သွေးထိုးလှုံဆော်မှု၊ ကျူးကျော် ၀င်ရောက်ပြီး နိုင်ငံတော် အချုပ်အခြာအာဏာကို ခြိမ်းခြောက်မှုတွေ၊ နိုင်ငံတာကာက အစွန်းရောက်တွေရဲ့ အာဘော်တွေ ဘယ်လို ပုံစံရှိနေတယ်ဆိုတာ မြင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်၊ ဒါမြန်မာနိုင်ငံ ခရီးဆက်ဖို့ အခွင့်ကောင်းတွေ ကြုံတွေ့ရတယ်လို့ ဆိုရပါမှာပါ၊ ဒါပေမဲ့ တကယ့်ကို နိုင်ငံတော်အနှံအပြားကို ထူထောင်ဖို့ ရည်မှန်းချက်ရှိဖို့ လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ " ဟု သုံးသပ်ရှင်းပြသည်။ မြန်မာနှင့် အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံဖြစ်သော ဘင်္ဂလာအာဏာပိုင်က ယင်းရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း ပဋိပက္ခများနှင့် ဆက်နွယ်မှုရှိနေသည်ဟု ယူဆရသော နယ်စပ်ချင်းထိစပ်နေသည့် ဘင်္ဂလာတွင်အခြေစိုက် ပြင်သစ်မှ နယ်စည်းမခြားဆရာဝန်များအဖွဲ့(MSF)၊ ငတ်မွတ်ခေါင်းပါးမှု ကူညီရေးအဖွဲ့ (ACF)နှင့် ဗြိတိန်အခြေစိုက် မူဆလင်ကူညီရေးအဖွဲ့ (Muslin Aid UK)တို့အား ဆက်လက်ပြီးမြန်မာမှ ရောက်ရှိလာမည့် မူဆလင်များအား ကူညီမှုမပြုလုပ်ရန် အကြိမ်ကြိမ် တားမြစ်မှုများ ရှိနေသည်။ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် ၀န်ကြီးချုပ် Sheikh Hasina က Al Jazeera တီဗီသတင်းသို့ ၎င်းတို့မှာ ဆေးဝါး၊ ငွေကြေး၊ စက်နှင့်အတူ ဘုတ်များအပြင် ရိက္ခာ အစရှိသည်များ ကူညီပေးနေကြောင်း၊ ဘင်္ဂလာဒေ့ရ်ှနိုင်ငံ အနေဖြင့် တာဝန်မရှိကြောင်း၊ မြန်မာမှာသာ တာဝန်ရှိကြောင်း၊ ဘင်္ဂလာတွင် ဒုက္ခသည်စခန်း များအတွင်း ၃၀၀၀၀၀ ရှိနေပြီးဖြစ်ကြောင်း၊ အတင်းအဓမ္မ စေလွှတ်နေခြင်းမဟုတ်ကြောင်း လွန်ခဲ့သော ဇူလိုင် ၂၇ ရက်နေ့က လန်ဒန်မြို့တွင် ပြောကြားခဲ့ပြီးနောက် ယခုကဲ့သို့ အကူအညီများ လုံးဝမပေးရန် NGOများကို တရားဝင်ပေးစာများ ပေးပို့လိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်။ ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း ဇွန် ၈ ရက်နေ့က ပဋိပက္ခကြောင့် မြန်မာမှ ဘင်္ဂလာသို့ ကျူးကျော်လာသူများဟု စွပ်စွဲပြီး ဘင်္ဂလာကမ်းခြေစောင့် တပ်ဖွဲ့နှင့် နယ်စပ်လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့များက နှစ်လကာလတွင် စုစုပေါင်း ဖမ်းဆီးရမိသူများ ၂၂၀၀ ကျော်တို့အား တရားမ၀င် ပို့ဆောင်ခဲ့ကြောင်းနှင့် မသင်္ခါသူတချို့အား ဖမ်းဆီးစစ်ဆေးပြီး အရေးယူမှုများ ပြုလုပ်လျက်ရှိနေကြောင်း ဒေသထုတ် သတင်းစာနှင့် ၀ပ်စာမျက်နှာများ၏ ကိန်းဂဏန်းများအရ သိရှိရသည်။ http://www.arakantimes.net/burmese/index.php/2012-02-24-06-58-57/347-2012-08-05-03-40-38
Written by မင်းသွီး
Sunday, 05 August 2012 18:09
ယနေ့ ညနေ ၄နာရီခန့်တွင် ကျောက်တော်မြို့မှ ဘုရားပေါင်းနှင့် ငတပေါင်းကျေးရွာများသို့ အပြန်လမ်းတွင် ဒေသခံများအား ကျောက်တော်မြို့ ပိုက်သယ်ရပ်ကွက်မှ ဘင်္ဂလီမူဆလင်များ အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။ ကျောက်တော်မြို့နယ် ဘုရားပေါင်းကျေးရွာနှင့် ငတပေါင်းကျေးရွာမှ ဒေသခံများ ကျောက်တော်မြို့သို့ ဈေးလာဝယ်ပြီး အပြန်လမ်းတွင် ပိုက်သယ်ရပ်ကွက်မှ ဘင်္ဂလီမူဆလင် ၆၀ကျော်ခန့် ဓါး၊ ဒုတ်များဖြင့် တိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။ " ဘုရားပေါင်းကျေးရွာနဲ့ ငတပေါင်းရွာကလူတွေ ကျောက်တော်မြို့ဈေးမှာ ဈေးဝယ်ပြီး သူတို့ရွာကို သုံးဘီးဆိုင်ကယ်တွေနဲ့ ပြန်ကြတာ၊ ပိုက်သယ်ရွာရှေ့ကိုရောက်တော့ ရွာက ဘင်္ဂလီမူဆလင်တွေက ထွက်လာပြီး ဓါးတွေ၊ ဒုတ်တွေနဲ့ လိုက်ခုတ်ကြပါတယ်။ လိုက်ခုတ်ကြတော့ သုံးဘီးဆိုင်ကယ်တွေက ကျောက်တော်မြို့ထဲကို ပြန်လှည့်ပြီး ပြေးလာကြတယ်။ သုံးဘီးဆိုင်ကယ်သမားတစ်ဦး ပေါင်မှာဓါးဒဏ်ရာရသွားလို့ ခုဆေးရုံပို့ထားတယ်။ နောက်တစ်ခြားလူတွေတော့ ဒဏ်ရာအထွေအထူးရရှိထားတာ မရှိပါဘူး။ ဒါပေမယ့် သူတို့ပြန်ဖို့ကို အလွန်စိုးရိမ်ကြောက်လန့်နေကြပါတယ်။ " ဟု ကျောက်တော်မြို့ဈေးဆိုင်ပိုင်ရှင် ကိုကျော်ခင်မှ ပြောသည်။ စစ်တပ်မှ ကျောက်တော်မြို့၊ ဂစ္စပနဒီ တံတားနှင့် ၄င်းဘင်္ဂမူဆလင် ပိုက်သယ်ရပ်ကွက်များတွင် လုံခြုံရေးယူထားပြီး ပိုက်သယ်ရပ်ကွက်များထဲသို့ အကြမ်းဖက်သွားသူများအား ၀င်ရောက်စုံစမ်း နေကြောင်းသိရှိရသည်။ ယင်းသို့အကြမ်းဖက်ပြီးနောက် ကျောက်တော်မြို့နယ် အပေါက်ဝကျေးရွာတွင်လည်း ဘင်္ဂလီမူဆလင်တစ်ဦး မိမိအိမ်ကို မိမိ မီးရှို့ထွက်ပြေးသွားသဖြင့် ဒေသခံများ အလျင်မြန် မီးငြိမ်းသတ်လိုက်နိုင်၍ ၄င်းဘင်္ဂလီမူဆလင် အိမ်တစ်အိမ်တည်းသာ မီးလောင်ကျွမ်းသွားကြောင်း သိရှိရသည်။ ကျောက်တော်မြို့နယ်မှ ၁၄မိုင်ခန့် ကွာဝေးသော ကျောက်တော်အောက်ပိုင်း ဂုတ်ပီထောက်ကျေးရွာတွင် ဘင်္ဂလီမူဆလင်များ မိမိအိမ်ကို မိမိ မီးတိုက်ထွက်ပြေးသောကြောင့် အိမ်ခြေ ၇၀ခန့်မီးလောင်ကျွမ်းသွားကြောင်း သိရှိရသည်။ " ကျွန်တော်တို့ကျေးရွာက ဘင်္ဂလီမူဆလင်တွေနဲ့ ရခိုင်တွေရောပြီး နေထိုင်ကြတာပါ။ အဲဒီတော့ သူတို့က ရခိုင်အိမ်တွေကိုမီးရှို့ချင်တာနဲ့ သူတို့အိမ်တွေ သူတို့မီးရှို့ပြီး ထွက်ပြေးကြတယ်။ ခုကျောက်တော်က စစ်တပ်နဲ့ တာဝန်ရှိသူတွေ စက်လှေနဲ့ လိုက်သွားကြပါတယ်။ ဘင်္ဂလီမူဆလင်နဲ့ ရခိုင်အိမ်စုစုပေါင်း ၇၀ကျော်လောက် မီးလောင်သွားတယ်လို့ ကြားရပါတယ် " ဟု ကျောက်တော်မြို့သို့ရောက်ရှိနေသော ဂုတ်ပီထောက်ကျေးရွာသား ကိုအစိုးမောင်က ပြောသည်။ ကျောက်တော်မြို့နယ်အတွင်းရှိသော ဘင်္ဂလီမူဆလင်များထပ်မံပြီး အကြမ်းဖက်လာမည်ကို ကျောက်တော်ဒေသခံများ အလွန်စိုးရိမ်နေကြကြောင်း သိရှိရသည်။ http://www.arakantimes.net/burmese/
နိုင်ငံ ရိုဟင်ဂျာများအရေးနှင့်ပတ် သက်၍ နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီး ဦးသိန်း စိန်မှ ရိုဟင်ဂျာများအား တတိယနိုင်ငံသို့ ပို့မည်။ လာခေါ်မည့်သူမရှိပါက ခြံခတ် ထားမည်ဟုဆိုကာ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း နေ တိုင်းရင်းသားများ၌ လုံးဝပတ်သက် ခြင်းမရှိသော ရိုဟင်ဂျာများနှင့်ပတ်သက် မိမိ၏ သဘောထားအားအတိအလင်း ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးနောက် သမ္မတကြီး
၏ ရပ် တည်ချက်အပေါ် ပြည်သူများမှ လွန်စွာ အားရဖြစ်လျက်ရှိပြီး အချို့သော ဒေသ များ၌မူ သမ္မတကြီး၏ သဘောထား ထုတ်ပြန်မှုအပေါ် ထောက်ခံကြိုဆိုသော အားဖြင့် နိုင်ငံတော် အလံများပါလွှင့်ထူ ခဲ့ကြသည်။
ဖြေ- ရိုဟင်ဂျာဆိုတာ ဘဘတို့ရဲ့ တိုင်း ရင်းသားမဟုတ်ဘူး။ ဧည့်နိုင်ငံသားအနေ နဲ့ပဲ သူတို့ကို လက်ခံထားတာ။ တစ်ခြား နိုင်ငံတွေမှာဆိုရင် လှေကလေးနဲ့ အတင်း ကမ်းလိုကပ်ပြီး လာကြတာ။ အဲ့သလို လာတဲ့အခါကြတော့လည်း ဥပမာ ယိုးဒ ယားဆိုပါဆို့။ သူတို့တွေက လှေတွေနဲ့ ၀င်လာပြီး ကမ်းကပ်ဖို့လုပ်တယ်။ အဲ့ဒါ ထိုင်းရေတပ်ကနေပြီးတော့ အတင်းကြိုးနဲ့ ပြန်ဆွဲသွားပြီး ပင်လယ်ထဲရောက်တဲ့ အခါ ကြိုးကို လွှတ်ပေးလိုက်ရော။ ဒါ တွေကို CNN တို့ BBCတို့ စတဲ့သတင်း တွေမှာ တွေ့ရတယ်။ ခု ရိုဟင်ဂျာဆိုတာ ကလည်း ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှဘက်ကနေ ပျက် ယွင်းလာတာပဲ။ ဟိုတုန်းက အိန္ဒိယက မွတ်စလင်ထဲမှာ ဗုဒ္ဓဘာသာကတော့ စောစောစီးစီးကွဲသွားတယ်။ အဲ့ဒီတော့ မွတ်စလင်ထဲမှာရိုဟင်ဂျာဆိုတာဘင်္ဂလား ဒေ့ရ်ှနဲ့ပဲ ဆိုင်တယ်။ ဒါပေမယ့် သူ့ဟာက ခုဒီထဲကိုတောင် ရောက်နေပြီ။
မေး- ရခိုင်ဒေသမှာဆိုရင် တိုင်းရင်းသား ဦးရေထက် ဘင်္ဂါလီဦးရေက အဆမတန် ပိုများနေပါတယ်။ ဘဘအနေနဲ့လည်း တပ်မတော်မှာ အဆင့်ဆင့် တာဝန်တွေ ထမ်းဆောင်ခဲ့ဖူးတာ့ အဲ့သလို တာဝန် ထမ်းဆောင်ခဲ့စဉ်အတွင်း ရခိုင်ဒေသနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အတွေ့အကြုံလေးတွေရှိ ရင် ပြောပြပေးပါလား။
ဖြေ- ဘဘရဲ့ အတွေ့အကြုံကို ပြောရ မယ်ဆိုရင် ဘဘနဲ့ ထောက်လှမ်းရေး ညွှန်ကြားရေးမှူး ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတင်ဦးနဲ့ ရခိုင်ဘူးသီးတောင်မောင်းတောဘက် ရောက်သွားတဲ့အခါ ရခိုင်တိုင်းရင်းသား က ၃ ရာခိုင်နှုန်းပဲရှိတယ်။ ဘင်္ဂါလီက တော့ (၉၇)ရာခိုင်နှုန်းလောက်ရှိနေတယ်။ သူတို့က ရခိုင်တိုင်းရင်းသူလေးတွေကို လက်ထပ်ယူထားကြတယ်။ အဲ့ဒါကိုကြည့် ပြီး ဗိုလ်ချုပ်ကြီး တင်ဦးရော၊ ဘဘရော စိတ်ဆင်းရဲလိုက်တာ။ ဒါမေပယ့် အချိန် က တော့်တော့်ကို လွန်နေပြီ။ ပြောရရင် လူမြိုတာပေ့ါနော်။ လူမြိုတဲ့အခါမှာ လည်း သဘာဝနဲ့ တူညီတဲ့ပုံစံမဟုတ်တဲ့ အခါကြတော့ သိပ်ကိုသိသာထင်ရှားတဲ့ သဘောဖြစ်သွားတာပေါ့။ ဘဘတို့ နိုင်ငံ ရဲ့ မြောက်ဖက်ခြမ်းမှာဆိုရင်လည်း တရုတ် ပြည်၊ အဲ့ဒီဘက်မှာလည်း သူတို့မြိုထား တာတော်တော်များတယ်။ အဲ့ဒီတုန်းက ဘဘတို့ စစ်ဆင်ရေးဝင်တဲ့အခါ ဘဘက ဗိုလ်ချုပ်မှူးလောက်ပဲရှိဦးမယ်။ မူဆယ်၊ နမ့်ခမ်းရဲ့ ဒီဘက် ပလောင်တောဝေါ ရောက်လို့ မြေပြင်ပေါ်ကြည့်လိုက်ရင် ရွာတွေက အစက်အပြောက်လေးတွေပဲ မြင်ရတယ်။ အဲဒီအစက်အပြောက်လေး တွေက မြေပြင်မှာတော့ တကယ့်ရွာကြီး တွေပဲ။ အဲဒီရွာရောက်ပြီး သေချာကြည့် လိုက်တော့လည်း တရုတ်တွေကြီးပဲ။ မှတ်ပုံတင်ကြည့်ပြန်တော့လည်း အမျိုး သားမှတ်ပုံတင်တွေဖြစ်နေပြန်ရော။ ဒါ တွေ နားလည်မှု တွေပေါ့နော်။ အဲ့သလို အောက်ခြေမှာ ဖြစ်နေတဲ့ နားလည်မှု လေးတွေကြောင့် တရုတ်ကြီးတွေက မုတ်ဆိတ်ကြီးတွေနဲ့ အမျိုးသားမှတ်ပုံတင် ကိုင်ထားတာတွေ့ရတယ်။
ဖြေ- ခုလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေ ဆွေးနွေးတဲ့အခါ ခုမန္တလေးလို နေရာမျိုး မှာတောင် တရုတ်တွေ မြိုနေပြီ။ အဲ့ဒါအ ပြင် ဟိုဖက်ကလည်းတစ်မျိုး။ ခု ရိုဟင်ဂျာ ကိစ္စမှာစစ်တကောင်းဟိုဘက်မှာဆိုရင် ဒါသူတို့နိုင်ငံပဲ။ ဒါပေမယ့် သူတို့က အချိန်အစောကြီးကတည်းက ဒီဘက် ရောက်လာတယ်။ အဲ့သလို ရောက်လာ ပြီးခုတော့ အသားတော်တော် ကျနေပြီ။ ဒါတွေကို တိုင်းရင်းသားလို့ တွက်ဆလို့မ ရဘူး။ ဟိုတုန်းကတော့ ဧည့်နိုင်ငံသား တွေ လုပ်တာပေါ့။ အဲ့ဒါကြီးကို ကိုယ့် နိုင်ငံနဲ့ လူမျိုးပါလို့ ဆိုလိုက်ရင် သမိုင်းပါ ပျက်သွားမယ်။
မေး- ဒီရိုဟင်ဂျာတွေဟာ လူဦးရေသိပ် သည်းစီးဝင်မှုသီအိုရီ(Population Density)နဲ့ ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံထဲစိမ့်ဝင်ဝါးမြို ခဲ့ပါတယ် အဲ့ဒီသီအိုရီအပေါ်မှာရော ဘဘလို တပ်မတော် ရဲ့ ခေါင်းဆောင်ပိုင်းမှ တာဝန်ထမ်း ဆောင်ခဲ့သူ တစ်ဦးအနေနဲ့ ဘယ်လိုရှုမြင် မိပါသလဲ။
ဖြေ- ကုလအတွင်းရေးမှူးချုပ်ဟောင်း ဦးသန့်ရဲ့မြေး သက်မြင့်ဦးရဲ့ စာအုပ်ထဲ မှာ မြန်မာနဲ့ တရုတ်ဆက်ဆံရေး၊ အိန္ဒိယ မြန်မာဆက်ဆံရေးကို ရေးထားတယ်။ အဲ့ဒီထဲမှာ ဘာပါသလဲဆိုတော့ မြန်မာ နိုင်ငံဟာ ကြားနေနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်နေ တာကြောင့် အဲ့ဒီနိုင်ငံကြီးတွေရဲ့ Population Density m Best ဖြစ်လာပြီး ဒီိနိုင်ငံဒုက္ခဖြစ်မယ်ဆိုတာလေးကိုတွေ့ရ ပါတယ်။ ပြီးတော့ လူးဝစ်ဆင်းဘက်ရဲ့ တရုတ်မြန်မာဆက်ဆံရေးစာအုပ်မှာလည်း မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ ထိပ်စပ်နေတဲ့ တရုတ်နိုင်ငံ ကြီးဘက်ကလည်း တော်တော်အန္တရာယ် များလာတယ်လို့ ရေးထားတယ်။ အဲ့ဒါ ကဘာလည်းဆိုရင် တပ်မတော်ရဲ့ အကြောင်းကို ကောင်းကောင်းနားမလည် တဲ့အခါကျတော့ တရုတ်ကိုသွားပြီးအကူ အညီတောင်းရတာပေါ့။ အဲ့ဒီမှာ တရုတ် နဲ့ပိုပြီးတော့ စီးပွားရေးတွေအားလုံးက တရုတ်ဘက်ပါကုန်ရော။
မေး- ဘဘအနေနဲ့ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ ဒီသမ္မတကြီး ဦးသိန်းစိန်ရဲ့ တိုင်းရင်းသား ပြည်သူတွေဘက်က ရပ်တည်မှုနဲ့ ရိုဟင် ဂျာ ပြဿနာအပေါ် ဘာများပြောကြား ချင်ပါသလဲ။
ဖြေ- မကြာသေးခင်က ဂျွန်ဟောကင်း တက္ကသိုလ်က ပါမောက္ခ ကားလ်ဂျက် ဆင်နဲ့အဖွဲ့တွေ အိမ်ကိုရောက်လာပြီး ဘဘကို မေးတယ်။ ကျွန်တော်တို့ နေ ပြည်တော်က ပြန်ဆင်းလာတာ ဟိုမှာ တရုတ်တွေကြီးပဲတဲ့။ အဲဒါဘာပြောချင် သလဲလို့မေးတယ်။ အဲ့ဒီသဘောမျိုးပါပဲ။ ဒီ ရိုဟင်ဂျာကိစ္စက ဘင်္ဂလားနဲ့မြန်မာ ကြားမှာ ဖြစ်တာလေ။ ကိုသိန်းစိန်တောင် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှကို သွားဖို့ခရီးစဉ်ကိုရပ်ဆိုင်း ထားတယ်လေ။ ဒါမျိုးလေးတွေရှိတော့ တော်တော့်ကို ချိန်ဆရတယ်။ နိုင်ငံတွေ ကလည်း လူလည်လုပ်တာတွေအများ ကြီး။ အဲ့ဒီဟာတွေကိုရှိတော့ တော်တော့် ကိုချိန်ဆရတယ်။ နိုင်ငံတွေကလည်း လူ လည်လုပ်တာတွေအများကြီး။ အဲ့ဒီဟာ တွေကို ကိုင်တွယ်ဖို့ဆိုရင်တော့ ကိုသိန်း စိန်အနေနဲ့ အပြည့်အ၀ကို ကိုယ်တွယ် နိုင်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်။ ကိုသိန်းစိန် က ဘယ်တော့မှ လက်လွတ်စပယ်လုပ် တဲ့လူမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူး။ ဟိုးအရင်ထဲ က အရမ်းကို ရိုးရိုးသားသားနေခဲ့တာ။ သူရော သူ့မိသားစုရောပေါ့နော်။ အား လုံးက ဟိတ်ဟန်မရှိဘူး။ ဒီကိစ္စနဲ့ပတ် သက်ပြီးတော့ ကိုသိန်းစိန်က ပညာရှင် တွေနဲ့တိုင်တိုင်ပင်ပင် လုပ်သွားမှာပါ””ဟု ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး ချစ်ဆွေ(ခ)စာရေး ဆရာကြီး နောင်စစ်သည်မှ ၁၉၅၂ ခုနှစ် မှစတင်ကာ မြန်မာ့တပ်မတော်၌ တာဝန် အဆင့်ဆင့် ထမ်းရွက်ခဲ့ပြီး ၁၉၉၇ဒီဇင် ဘာ(၇)ရက်နေ့၌ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး ရာထူးဖြင့် တပ်မတော်မှ အငြိမ်းစား ယူရာ ယခုတွင် နောင်လာနောင်သား မျိုးဆက်သစ်များအတွက် အကျိုးဖြစ်စေ ရန် ရည်ရွယ်၍ စာပေရေးသားခြင်းများ ပြုလုပ်နေလျက်ရှိသည်။
ဘူး သီး တောင် သား တ ယောက် က ပြော ပြ မည့် ဘ င်္ဂါလီ တွေ အ ကြောင်း
by Aye Kyaw Zan on Saturday, August 4, 2012 at 11:15am ·
About Bengalis ( So-Called-Rohinja ) Told byaNative Buthidaung
ဘူး သီး တောင် သား တ ယောက် က ပြော ပြ မည့် ဘ င်္ဂါလီ တွေ အ ကြောင်း အ ပို င်း ( ၁ )
( ဤ ဆောင်းပါးကို ကျနော့်ထက် အင်္ဂလိပ်စာ ကျွမ်းကျင် လိမ်မာသော ဖဘမိတ်ဆွေတဦးဦးအား ဘာသာ ပြန်ဆိုစေလိုသော ဆန္ဒရှိပါသည်။ ထိုသို့ အင်္ဂလိပ်ဘာသာသို့ ပြန်ဆိုလိုခြင်းမှာ မြန်မာပြည် အနောက်ဖက်စွန်းနေ ဘင်္ဂါလီလူမျိုးတို့၏ အခြေအနေအမှန်ကို တကယ် နဝေတိမ်တောင် ဖြစ်နေ ကြသော၊ သို့မဟုတ် ဖြစ်ယောင်ဆောင် နေကြသော ကမ္ဘာ့နိုင်ငံသားများ ( world citizens ) ၏နားသို့၊ ဘယ်နှစ်နားသို့ ပေါက်ပေါက်၊ ပေါက်စေချင် သောကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။ အခြေအနေက ခွင့်ပြုလျှင် ဤဆောင်းပါးကို တိုသွားအောင် တည်းဖြတ်ပြီး၊ ……………………… သို့ပေးပို့လိုပါသည်။ ထို့ကြောင့် ဤဆောင်းပါးထဲတွင် "ဒီ 'ကုလား' ( လူဦးရေ ၁သန်းလောက်ရှိ ) တွေကို မြန်မာပြည်က အကုန်မောင်းထုတ်ပစ်" ဟူသော လက်တွေ့ အလုပ် မဖြစ်သော၊ ဈေးပေါလှသည့် ကြုံးဝါးသံများကို ကြားရလိမ့်မည် မဟုတ်ပါ။
ကျနော်တို့ non-Bengali မြန်မာနိုင်ငံသားတွေက လက်တွေ့ အလုပ်ဖြစ်နိုင်သော၊ ပြဿနာကို တကယ်ဖြေရှင်းဖို့ အာရုံစိုက်သော နည်းနာများ ကို မကြံဆ၊ မဆွေးနွေးကြဘဲ အလွယ်ကူဆုံးအလုပ်ဖြစ်သော “ကုလား” ကို ထိုင်ဆဲသည့် အလုပ်ကိုပဲ လုပ်နေကြပါသည်။ ထို့ကြောင့် ဘူးသီးတောင်မြိုနယ်တွင် မွေးဖွားခဲ့သူ၊ ကျနော့်၏ဆွေမျိုး သားချင်း မိသားစုဝင်များအားလုံး ဘူးသီးတောင်မြို့နယ်ထဲမှာပင် လက်ရှိနေထိုင်လျှက်ရှိကြသူ တဦး အနေဖြင့် မနေနိုင်လွန်း၍ ဤဆောင်းပါးကို ရေးပါသည်။ ဤသို့ရေးရာတွင် liberal journalism ၌ အရေးအကြီးဆုံးကျင့်ဝတ်သိက္ခာ ဟုယူဆကြသည့် “သမာသမတ်” ရှိစေခြင်း ( Being unbiased ( Fairness ): the most important ethic/ dignity of journalism ) အလို့ငှာ “ကုလား” တွေကို မဆဲထားသည့်အပြင် သူတို့အပေါ် တော်တော် ကောင်းထားသဖြင့် ကျနော်ကပဲ အဆဲခံရမည်ဟု ထင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ၁၀၀% လိပ်ပြာသန့်စွာ ကြိုတင်ပြောထားလိုမှာ ကျနော့်ကိုယ်ထဲ၌ ဘင်္ဂါလီ သွေးတစက်မျှ မပါဝင်ပါ ( ၀% )။ ကျနော် ဘင်္ဂါလီတွေနှင့် အကျိုးစီးပွား ပတ်သက် ဆက်နွယ်မှု တပြားသားမျှမရှိပါ ( ၀% )။ ကျနော့်ကို “အသုံးမကျတဲ့ကောင်” ဟုဆဲရေးလိုကြလျှင် အဆဲ ခံရနိုင်မှန်းသိသိနှင့် ( လက်ရှိအချိန်မှာ အများတကာက သဘောကျကြမည် မဟုတ်ဟုသိသိနှင့်) သို့ရာတွင် ယခုအချိန်မှာပြောမှ အကျိုးရှိမည်ထင်သော၊ လူအုပ်ကြီးနှင့်အတူ လိုက်ယောင်တာ မဟုတ်ဘဲ မိမိအမှန်တကယ် ယုံကြည်သောစကားကို သင် လူသိရှင်ကြား ဘယ်နှစ်ကြိမ်လောက် ပြော ခဲ့ပြီးပြီလဲဟု ကိုယ့်ကိုကိုယ် အရင် မေးကြည့်စေချင်ပါကြောင်း။ )
၁။ ကျနော် ဘူးသီးတောင်သား ( I amanative Buthidaung )
ဦးစွာပထမ ကြေငြာထားသင့်သည်မှာ ကျနော်သည် မြန်မာနိုင်ငံ အနောက်ဖက်အစွန်ဆုံး၊ ရခိုင် ပြည်နယ်မြောက်ဖျားဒေသ၊ ဘင်္ဂါလီလူမျိုးတွေ အများအပြားနေထိုင်ရာ ( ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီး ဒု-ဗိုလ်ချုပ်ကြီးကိုကို၏ တရားဝင်ပြောကြားချက်အရ ၉၄% ) ဘူးသီးတောင်မြို့နယ်အတွင်း မွေးဖွား၊ ကြီးပြင်းခဲ့သူဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် မိရိုးဖလာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တဦး ဖြစ်သော်လည်း ဘင်္ဂါလီ ဘာသာ စကားကို အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားထက် ပိုမိုသွက်လက်စွာ ပြောဆိုနိုင်ပါသည်။ တကယ်တော့ ကျနော့်ကို ကကြီး၊ခခွေး မြန်မာသင်ပုန်းကြီး၊ A,B,C,D English Alphabet သင်ပေးခဲ့ကြသူတို့နှင့် (၈)တန်း အောင်သည်အထိ ကျနော့်၏ဆရာများအားလုံးမှာ ဘင်္ဂါလီလူမျိုး ကျောင်းဆရာများချည်း ဖြစ်ပါသည်။ ( ဘင်္ဂါလီ အမျိုးသမီးတွေက အပျိုဖော်ဝင်ပြီးချိန် မှစ၍ သွေးဆုံးချိန်အထိ အိမ်ပြင် မထွက်ရသဖြင့် ဘင်္ဂါလီဆရာမတော့ မရှိခဲ့ဖူးပါ။ ) မူလတန်းမှလွဲ၍ အထက်တန်းအထိ ကျနော့်၏ ကျောင်းနေဖက် အများစုသည်လည်း ဘင်္ဂါလီများသာဖြစ်ကြပါသည်။ ကျနော် မွေးဖွား၊ ကြီးပြင်းခဲ့ သောကျေးရွာသည် ဘင်္ဂါလီတွေနေထိုင်ရာ ကျေးရွာများနှင့် ၁-၂ မိုင်ခန့် အကွာအဝေးမျိုး သာရှိပြီး နေ့စဉ် ဈေးရောင်း ဈေးဝယ် အစရှိသော ကူးလူးဆက်ဆံမှုရှိသဖြင့် ကျနော် ဤလူမျိုးတွေအကြောင်းကို သူတို့လောက်နီးပါး သိပါသည်။ ထို့ကြောင့် ဤဆောင်းပါးတွင် ကမ္ဘာ့နိုင်ငံများ၊ ကမ္ဘာ့အဖွဲ့အစည်းများ၊ ကမ္ဘာ့မီဒီယာနှင့် မူဆလင်ကမ္ဘာတို့က ဂဂနန မသိသေးသော ( သို့တည်းမဟုတ် မသိချင်ယောင် ဆောင်နေကြသော )၊ ကျကျနန လှည့်ဖြားခံနေရသောအချက် အချို့ကို ပြောပြချင်ပါသည်။
( ၁ ) ဤလူမျိုး၏အမည်ကို ကျနော် “ဘင်္ဂါလီ” ( လူမျိုး ) ဟု တောက်လျှောက် ရည်ညွှန်းခေါ်ဝေါ် နေခြင်းမှာ ပြည်ပမှ “ရိုဟင်ဂျာ”အရေးလှုပ်ရှားနေကြသည့် ဘင်္ဂါလီနိုင်ငံရေးသမားများမှအပ ဤလူမျိုး ၉၉.၉၉% လောက်က သူတို့၏လူမျိုးအမည်ကို “မူ-ဆူလ် -မန်း” ( Muslim ) သို့မဟုတ် “ဘာ-ငါလ်” ( ( Bengal = Bengali ) ဟူ၍သာ ခေါ်ဝေါ်ကြပြီး ဘယ်သူကမှ “ရိုဟင်ဂျာ” ( Rohingya ) ဟု မခေါ်ကြသောကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။ ကျနော်ကြုံဖူးသလောက် မေယုမြစ်ဝှမ်းတလျှောက် ( မောင်တော၊ ဘူးသီးတောင်၊ ရသေ့တောင်၊ စစ်တွေမြို့နယ် ) နေ အနောက်ပိုင်းသားဘင်္ဂါလီ ( Westerners ) များက မြောက်ဦး၊ ကျောက်တော်မြို့နယ်လောက်မှစ၍ ရခိုင်ပြည်နယ် အတွင်းဖက်/ အရှေ့ဖက်ခြမ်း နေ ရခိုင်စကားမွှတ်နေအောင် ပြောတတ်သော အရှေ့ပိုင်းသားဘင်္ဂါလီ ( Easterners ) များကို အနည်းငယ် မနှစ်လိုသံဖြင့် ( အမေရိကန်တွေက Southerners ဟုသုံးနှုန်းကြသလို ) “ရိုဟင်ဂျာ” ( ရွင်းဂျား ) ဟူ၍ ခေါ်တတ်လေ့ ရှိကြပါသည်။
ထိုသို့“ရိုဟင်ဂျာ”( ရွင်းဂျား ) ဟူသောစကားလုံးမှာ “အရှေ့ပိုင်းသား” တွေဟု ခွဲခြားပြောလိုမှ သုံးစွဲရသဖြင့် အနောက်ဖက်ခြမ်းနေ ဘင်္ဂါလီများ ယခင်က မိမိကိုယ်မိမိ “ရိုဟင်ဂျာ” ဟု ရည်ညွှန်းလေ့ မရှိကြပါ။ ( ရန်ကုန်သားက ကျနော် “အညာသား” ပါခင်ဗျားဟု သုံးဖို့မဖြစ်နိုင်သလို ဖြစ်ပါသည်။ ) သူတို့သည် ဘာသာတရား အလေးထားသည့်အနေဖြင့် “Mu-sul-man” ( = Muslim ) ဟုအခေါ်ခံ ရသည်ကို ပိုသဘောကျကြပါသည်။ သို့သော်လည်း ယင်းမှာ Buddhist ဆိုသကဲ့သို့ ဘာသာဝင် အမည်သာ ဖြစ်ပြီး လူမျိုးနွယ် ( ethnic group ) အမည် မဟုတ်သေးပါ။ လူမျိုးနွယ်အမည် အဖြစ်ဖြင့် ကား ဤလူမျိုး ၉၉.၉၉% လောက်က သူတို့ကိုယ်သူတို့ “ဘာ-ငါလ်” ( Ba-ngal = Bengal/ Bengali ) ဟူ၍သာ ရည်ညွှန်းကြ ပါသည်။ သို့ရာတွင် ထို “ဘာ-ငါလ်” ဟူသောအမည်ကို ရခိုင်နှင့် ဗမာတွေက ခေါ်လေ့ရှိသော “ကုလား” နှင့် အဓိပ္ပါယ်တူညီသည်ဟု ခံစားမိကြပုံတော့ ပေါက် ပါသည်။ တကယ်တော့ သူတို့ကလည်း ရခိုင်လူမျိုးကို “ရခိုင်” ဟုမခေါ်ဘဲ “Magh” ( မောဂ် ) ဟူ၍ သာခေါ်ကြပါသည်။ အဓိပ္ပါယ်ဆိုးဖြင့် ခေါ်ကြတာဖြစ်သော်လည်း ရခိုင်တွေကတော့ ( တရုတ်တွေက “တရုတ်” အခေါ်ခံရလို့ စိတ်မဆိုးသလိုပင် ) စိတ်မဆိုးကြပါ။
အချုပ်အားဖြင့်ပြောရလျှင် “Rohingya” ဟူသော အမည်သည် လူမျိုးနွယ်အမည် / “နာမ်”စစ်စစ် ( ethnic group’s name/ “pure noun” ) မဟုတ်ဘဲ အမျိုးအစားခွဲခြားပြ “နာမဝိသေသန သဘော ဆောင်နာမ်” ( “adjectival noun” ) တခုသာ ဖြစ်ပါသည်။ ဥပမာ၊ Georgian, Southerner တို့သည် လူမျိုးစုအမည်မဟုတ်ဘဲ ထိုသူတို့၏လူမျိုး (နိုင်ငံသား) အမည်မှာ American သာဖြစ် သကဲ့သို့ပင်။ သို့ရာတွင် ယင်းအမည်သည် ယခုတော့ ဘင်္ဂါလီ lobby သမားများ၏ intentionally misled, manipulated and disguised information များဖြင့် မြန်မာပြည်မှဘင်္ဂါလီလူမျိုးအားလုံးကို ခေါ်ဝေါ်သည့် လူမျိုးနွယ်အမည်တခု ဖြစ်လာနေပါသည်။ ကျနော် ဤနေရာတွင် ထောက်ပြချင်သော အချက် ( point ) မှာ “ဘင်္ဂါလီ” ဆိုသောအမည်သည် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များ လွှမ်းမိုးသော မြန်မာအစိုးရ က အစ္စလမ်ဘာသာဝင် ဘင်္ဂါလီများအား ယခုမှ တီထွင်ခေါ်ဝေါ်သော၊ နှိမ့်ချ၍ခေါ်ဝေါ်သော အမည် မဟုတ်ဘဲ သူတို့ကိုယ်တိုင် ခေါ်ဝေါ်ကြသည့်အတိုင်းနှင့် ဗြိတိသျှကိုလိုနီ အစိုးရကလည်း ၁၈၂၄-ခုနှစ် ရခိုင်ဒေသကို သိမ်းပိုက်ပြီးချိန်မှစ၍ ၁၉၄၈-ခုနှစ် မြန်မာနိုင်ငံကို လွတ်လပ်ရေးပေးချိန်အထိ အငြင်း ပွားမှု တစုံတရာမရှိဘဲ တရားဝင်ခေါ်ဝေါ်ခဲ့သည့် အမည်သာ ဖြစ်ပါသည်။ “Rohingya” ဟူသော လူမျိုးအမည်ကို မြန်မာနိုင်ငံသန်းခေါင်စာရင်း ကောက်ယူမှုသမိုင်းတွင် မည်သည့်အခါကမျှ မသုံးစွဲခဲ့ ဟုသိရပါသည်။
လူမျိုးတမျိုးသည် မိမိတို့အခေါ်ခံလိုသည့်အမည်ကို ခိုင်လုံသောသမိုင်းအထောက်အထား၊ အများ စု၏ဆန္ဒ ( ဥပမာ၊ petion ပြုလုပ်ခြင်း ) များဖြင့် နိုင်ငံတော်သို့ တရားဝင် တောင်းဆိုနိုင်ပါသည်။ ( ရခိုင်လူမျိုး ၁၀၀%နှင့် မြန်မာနိုင်ငံသား ၉၀% လောက်က သဘောကျကြမည် မဟုတ်သော် လည်း ) ကျနော့်ရင်ထဲရှိသည့်အတိုင်း ရိုးသားစွာဘက်မလိုက်ဘဲရေးရလျှင် ဘင်္ဂါလီများသည် “မြန်မာနိုင်ငံတွင် မွေးဖွားခဲ့ကြသူများ” အား နိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်ပြုရန်ကိုပင် ကောင်းမွန်၊ ချိုသာ၊ တရားဝင် အမူအရာဖြင့် တောင်းဆိုနိုင်ပါသေးသည်။ သို့ရာတွင် ယနေ့ လူဖြူအမေရိကန် ( Caucasian Americans) တို့က တိုင်းရင်းသား အမေရိကန် ( Native Americans ) ဟုအခေါ်ခံချင်၍ လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း ၁၀၀၀ လောက်ကပင် အတ္တလန်တစ် သမုဒ္ဒရာကိုသစ်ဖောင်များဖြင့်ဖြတ်ကာ အမေရိကတိုက်သို့ ရောက်ရှိ ခဲ့ကြသည်ဟူ၍ သမိုင်းကိုလိမ်ညာ ဖို့မကြိုးစားကြသကဲ့သို့ပင် So-called Rohingyas တွေကလည်း တိုင်းရင်းသားဖြစ်ရဖို့အရေး အထောက်အထားမခိုင်မလုံနှင့် ကြိုးစားမနေသင့်ဟု ထင်ပါသည်။ အမေ ရိကန်သမ္မတ ( ၄၄ ) ယောက်စလုံး အမေရိကတိုက်၏ တိုင်းရင်းသားများ မဟုတ်ကြပါ။ အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု၏ နိုင်ငံသားများသာ ဖြစ်ကြပါသည်။
ဘင်္ဂလီလူမျိုးများ တိုင်းရင်းသား ဖြစ်ထိုက်၊ မဖြစ် ထိုက် နည်းနည်းစဉ်းစားကြည့်ရအောင်..။ ကျနော်သည် သမိုင်းပညာရှင်သော်၎င်း၊ မည်သည့်ပညာရှင်မှသော်၎င်း မဟုတ်သဖြင့် ဘင်္ဂါလီ လူမျိုး ( Rohingya ဆိုသူ ) တို့၏မူလဇစ်မြစ် ( origin ) ကိုသမိုင်းဆရာတဦးလို မလွဲနိုင်သော သမိုင်းအထောက်အထားများဖြင့် အခိုင်အခံ့ ရှင်းပြနိုင်မည် မဟုတ်ပါ။ ထိုအလုပ်ကို ပြည်တွင်း ပြည်ပမှ သမိုင်းပညာရှင်များ ( အစ္စလမ်ဘာသာဝင်များ အပါအဝင် ) သာဆောင်ရွက်သင့်ကြပါသည်။ ကျနော် တို့ ငြင်းခုန်နေ၍ မပြီးပါ။ သို့ရာတွင် “ဟုတ်ကို ဟုတ်ရမည့်” သမိုင်းဆိုင်ရာ အထောက်အထား ( historical evidences ) များမဟုတ်သော်လည်း Wikipedia တွင် ဖော်ပြထားချက်များကို ကျနော့်၏ conclusion နှင့်ပေါင်းစပ်ထားသော တွေးဆချက် ( assumption ) ကိုကား တွေးကြည့် နိုင်ရုံမျှ ပြောပြလိုပါသည်။
“ရိုဟင်ဂျာ” ဆိုသောစကားရပ်၏ မူလဇစ်မြစ်နှင့်ပတ်သက်၍ အယူအဆ အမျိုးမျိုး ကွဲပြားကြပါသည်။ လောလော ဆယ် ခေတ်စားနေသော အဆို တရပ်မှာ အဒီ ( ဂ ) ရာစုလောက်တွင် အာရပ်ကုန်သည်များ ရမ်းဗြဲကျွန်း ( Ramree Island ) အနီး၌ သင်္ဘောပျက်၍ ရခိုင်ရှင်ဘုရင်က “သတ်စေ” မိန့်တော်မူရာ အာရပ်တို့က အရဗီဘာသာတွင် “သနားတော်မူပါ” ဟု အဓိပ္ပါယ်ရသည့် “Rahma” ဆိုသောစကားလုံးဖြင့် ငိုယိုတောင်းပန်ခဲ့ ကြသည် ဆိုပါသည်။ ထိုသူတို့ကို “Raham” ဟုခေါ်ရာမှ၊ ကာလရွေ့လျှားလာသော အခါ “Rhohang”၊ ထိုမှ သည် “Rohingya” သို့ တရွေ့ရွေ့ ပြောင်းလာသည်ဟု ဆိုပါသည်။ နောက်ထပ် ရွှေဥာဏ်တော် စူးရောက်လှသော ဆရာတယောက်ကတော့ ရခိုင်ပြည်၏ “မြို့ဟောင်း” ( Mrohaung ) မှသည် (မ)သံ ပျောက်၍ “(M)Rohang”၊ ထိုမှသည် “Rohingya” ဖြစ် လာသည် ဆိုပါ၏။ ဤသည်တို့မှာ ခိုင်မာသော သမိုင်းအထောက်အထားမျိုးမဟုတ်ဘဲ အလွန်ခနော်နီခနော်နဲ့နိုင်လှသော ပါးစပ်ရာဇဝင် ဆန်ဆန် “ရော်ရမ်းမှန်းဆချက်” များသာ ဖြစ်ပါသည်။ ခိုင်လုံသော အထောက်အထား အနေဖြင့်ကား “Rooinga” ဟူသောအမည် ကို အောက်ပါဆောင်းပါးမှာ ပထမဆုံးတွေ့ရသည်ဟု ဆိုပါ သည်။
“Arakan history expert Dr. Jacques P. Leider points out that the term Rooinga was used inalate 18th century report published by the British Francis Buchanan-Hamilton. In his 1799 article “A Comparative Vocabulary of Some of the Languages Spoken in the Burma Empire,” Buchanan-Hamilton stated: "I shall now add three dialects, spoken in the Burma Empire, but evidently derived from the language of the Hindu nation. The first is that spoken by the Mohammedans, who have long settled in Arakan, and who call themselves Rooinga, or natives of Arakan."
ဘူး သီး တောင် သား တ ယောက် က ပြော ပြ မည့် ဘ င်္ဂါလီ တွေ အ ကြောင်း ( ၂ )
by Aye Kyaw Zan on Saturday, August 4, 2012 at 5:03pm ·
ထို့ပြင် ရခိုင်ဘုရင်တို့၏ စစ်တကောင်း၊ ဘင်္ဂလားနယ်တို့နှင့်ပတ်သက်မှုကို အောက်ပါအတိုင်း တွေ့ရပါသည်။ မူရင်းအတိုင်း ဖတ်နိုင်ကြစေရန် ကျနော် ဘာသာမပြန်ပြတော့ပါ။ ( ကျနော် တပိုဒ်နှင့် တပိုဒ် ဆီလျှော်သလို ဆက်ထားပါသည်။ ref: http://en.wikipedia.org/wiki/Rohingya_people )
“The Chittagong region was under the “Vesali kingdom of Arakan” ( ဝေသာလီ ရခိုင့်နိုင်ငံတော် ) in the 6th to 7th century.”
“King Narameikhla (1430–1434) of Kingdom of Mrauk U ( မြောက်ဦးဘုရင် နရမိတ်လှ၊ အေဒီ ၁၄၃၀-၁၄၃၄ ) , after 24 years of exile in Bengal, regained control of the Arakanese throne in 1430 with military assistance from the Sultanate of Bengal, the Bengalis who came with him formed their own settlements in the region.” “Narameikhla ceded some territory to the Sultan of Bengal and recognized his sovereignty over the areas. In recognition of his kingdom's vassal status, the kings of Arakan received Islamic titles and used the use of Bengali Islamic coinage within the kingdom. Narameikhla minted his own coins with Burmese characters on one side and Persian characters on the other.”
ရခိုင်ဘုရင်တွေမှာ အခြေအနေအရ ဤကဲ့သို့ ဘင်္ဂါလီ ဆုလ်တန်စော်ဘွားများနှင့် ဆက်သွယ် ပတ်သက်ရမှု၊ ဘင်္ဂါလီ ကျေးတော်မျိုးကျွန်တော်မျိုးတို့အား သူကောင်းပြုရမှုများ ရှိပါသည်။ ဘင်္ဂါလီ ဘွဲ့အမည် ယူသော်လည်း ရခိုင်ပြည့်ရှင် မှန်သမျှ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များချည်းဟု ထင်ပါသည်။ ကျနော် ကောင်းစွာ မသိသော်လည်း ရခိုင်ပြည်ကို ဘင်္ဂါလီ ဘုရင် အုပ်ချုပ်သည်ဟု မကြားဖူးသောကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။ ဤသူတို့သည် ရခိုင်ဒေသသို့ ပထမဦးဆုံး ဝင်ရောက်လာခဲ့သော ဘင်္ဂါလီ migrants တွေဖြစ် နိုင်ပါသည်။ ကျောက်တော်၊ မြောက်ဦး၊ မင်းပြားဖက်နေ ထို ရှေးဦးဘင်္ဂါလီများကို “ရိုဟင်ဂျာ”( ရွင်းဂျား ) ဟု ခေါ်နိုင်ပါလိမ့်မည်။ သူတို့သည် “နိုင်ငံသား” အဆင့်အတန်း ( citizenship ) လည်းရရှိထားကြပြီး ဖြစ်မည်ဟု ထင်ပါသည်။ နိုင်ငံသား ပေးလည်း ပေးထိုက်ပါသည်။ အေဒီ ၁၈၂၃ မတိုင်မီကတည်းက ရောက်နှင့်နေကြသော ဤဘင်္ဂါလီ ( ရိုဟင်ဂျာ ) migrants တွေကို တိုင်းရင်းသားဟု ခေါ်ထိုက်၊ မခေါ်ထိုက်ကတော့ ကျနော် မှတ်ချက်မပေးချင်ပါ ( ဥာဏ်မမီတော့ပါး)။
“Narameikhla's successors occupied Ramu in 1437, and Chittagong in 1459. After the defeat of Mahmud Shah in the hands of Sher Shah in 1538, the Arakanese Kingdom of Mrauk U regained Chittagong, and from this time onward, until its conquest by the Mughals (မဂိုဘုရင်များ), this region was under the control of the Portuguese and the Magh irates (a notorious name for Arakanese) for 128 years.”
“Following the Burmese conquest of Arakan in 1785, as many as 35,000 Arakanese people fled to the neighboring Chittagong region of British Bengal in 1799 to avoid Burmese persecution and seek protection from British India. The Burmese rulers executed thousands of Arakanese men and deportedaconsiderable portion of the Arakanese population to central Burma, leaving Arakan asascarcely populated area by the time the British occupied it.”
“Therefore, British policy encouraged Bengali inhabitants from adjacent regions to migrate into fertile valleys of Arakan as agriculturalists. The East India Company extended the Bengal administration to Arakan, thus there was no international boundary between Bengal and Arakan, and no restrictions on migration between the regions. In the early 19th century, thousands of Bengalis from the Chittagong region settled in Arakan seeking work opportunities”.
“The British census of 1891 reported 58,255 Muslims in Arakan. By 1911, the Muslim population had increased to 178,647. ( Aye Chan 2005, p. 401 - ၁၈၉၁ တွင် ဗြိတိသျှ အစိုးရကကောက်ယူခဲ့သည့် သန်းခေါင်စာရင်းအရ ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် မူဆလင်ဦးရေ ၅ သောင်းကျော် သာ ရှိခဲ့ပါသည်။ ၂၀ နှစ်အကြာ ၁၉၁၁ တွင် ၁ သိန်း ၇ သောင်းကျော် အထိတိုးလာခဲ့ပါသည်။ ယခု ဘင်္ဂလီလူမျိုးဦးရေ ( ၈ ) သိန်းနှင့် ( ၁ ) သန်းကြားရှိမည်ဟု ခန့်မှန်းရပါသည်။ ) The waves of migration were primarily due to the requirement of cheap labor from British India to work in the paddy fields. Immigrants from Bengal, mainly from the Chittagong region, "moved en masse into western townships of Arakan". To be sure, Indian immigration to Burma wasanationwide phenomenon, not just restricted to Arakan. Historian Thant Myint-U writes: "At the beginning of the 20th century, Indians were arriving in Burma at the rate of no less thanaquarter million per year. The numbers rose steadily until the peak year of 1927, immigration reached 480,000 people, with Rangoon exceeding New York City as the greatest immigration port in the world. This was out ofatotal population of only 13 million; it was equivalent to the United Kingdom today taking2million peopleayear." The Burmese under the British rule felt helpless, and reacted witha"racism that combined feelings of superiority and fear."
သမိုင်းကျမ်းစာအုပ်များကို ဖတ်ဖို့လက်လှမ်းမမီသဖြင့် Wikipedia ဖတ်ပြီး ကျနော့်၏သုံးသပ်ချက် ကိုပြောပြရလျှင် အာရပ်ကုန်သည်တွေ သင်္ဘောပျက်၍ ရခိုင်ရှင်ဘုရင်က အသက် ချမ်းသာခွင့်နှင့် နေရာထိုင်ခင်းပေးခဲ့သည် ဆိုသည်မှာ မှန်နိုင်ပါသည်။ ( ဗျတ်ဝိ၊ ဗျတ္တတို့ ညီနောင်တွေများလားး)။ ဒါပေမဲ့ သင်္ဘောတစီးပျက်ရုံဖြင့် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးတမျိုး တိုးပွားလာဖို့အကြောင်း ( ဆင်ခြေ ) သည် သိပ် လက်ခံနိုင်ဖွယ်မရှိချေ။ ယခင် သက်ဦးဆံပိုင် ဘုရင်များခေတ်ကတမင်းကို တမင်း စစ်ကူပေးသည့် ကိစ္စတွေ ရှိခဲ့တာလည်း မှန်နိုင်ပါသည်။ ဒါပေမဲ့ ဘိုးတော်ဘုရားလက်ထက် အေဒီ ၁၇၈၄ ခုနှစ်တွင် ရခိုင်ပြည်ကို သိမ်းပိုက်ပြီးနောက် ရခိုင်လူမျိုး ၃၅၀၀၀ ခန့် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှဖက်သို့ ထွက်ပြေးရသည် ဆိုရာ မြောက်ဦး၊ ကျောက်တော်တဝိုက်တွင် အခြေကျနေကြသူ ဘင်္ဂါလီ ( ရိုဟင်ဂျာ ) များလည်း ပါဝင်ခဲ့ကြဖွယ် ရှိသည်။ ဘကြီးတော်မင်းလက်ထက် မဟာဗန္ဓုလစစ်သူကြီး ရခိုင်သို့စစ်ချီစဉ် ကလည်း ရခိုင်လူမျိုးများ အဖိတ်အစဉ် အတော်များခဲ့သည်ဟု သိရသဖြင့် ၁၅ ရာစုလောက် ကတည်းက ရောက်နေခဲ့သည်ဟုချည်း တွင်တွင်ပြောနေကြသော “ရိုဟင်ဂျာ” သမိုင်းဆရာများ အေဒီ ၁၈၂၃ အရောက်မှာ ရခိုင်ပြည်တွင် ဘင်္ဂါလီ ( ရိုဟင်ဂျာ ) ဦးရေ ဘယ်လောက် ကျန်နေသေးသလဲဟု စစ်ဆေးကြည့်သင့်ကြလေသည်။ ကျနော်ကတော့ သမိုင်းဆရာ မဟုတ်သဖြင့် မသိပါ။
ယခု ဤလူမျိုးတွေ ဘယ်ကလာသလဲဆိုတာ သဲလွန်စ ရလိုရငြား ကျနော်တို့၏ အနောက်ဖက် အိမ်နီးချင်း ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံ ဖက်သို့ တချက်ငဲ့စောင်းကြည့်ကြရအောင်။ Bangladesh ၏ အဓိပ္ပါယ်သည် ( Land/ Country of Bengal ) ဖြစ်ပါသည်။ ဘင်္ဂ လားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံတွင် ပြောဆိုသည့် ဘာသာစကားနှင့် သူတို့၏ လူမျိုးနွယ်ကို “Bengal/ Bengali” ဟုခေါ်ကြပါသည်။ ကျနော်တို့ဆီက ဘင်္ဂါလီ ( so-called Rohingya) တွေပြောဆိုကြသည့် ဘာသာစကားသည်လည်း ထူးထူးခြားခြား တိုက်ဆိုင်စွာပင် Southern Chittagonians တွေပြောဆိုကြသည့် Bengali စကားနှင့် ချွတ်စွတ်နီးပါး တူညီနေပါသည်။ အညာသားနှင့် ရန်ကုန်သား လေယူလေသိမ်း ( dialect )၊ တချို့အသုံးအနှုန်း ကွာသလောက်သာ ကွာပါသည်။ ထို့ကြောင့် ကျနော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံက ( အထူးသဖြင့် မောင်တော၊ ဘူးသီးတောင်၊ ရသေ့တောင်၊ စစ်တွေမြို့များမှ ) ဘင်္ဂါလီလူမျိုးများသည် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှမှဘင်္ဂါလီ များနှင့်မျိုးနွယ်တူ၊ ဗြိတိသျှ ကိုလိုနီပြုမှု နောက်ပိုင်း ( ၁၈၂၃ နောက်ပိုင်း ) တွင် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှဖက်မှ ဝင်ရောက်လာခဲ့ကြခြင်းဖြစ်သည် ဟူသောအဆိုကို ကျနော် ပိုထောက်ခံပါသည်။
( ၂ ) ဘင်္ဂါလီလူမျိုးတို့သည် မြန်မာနိုင်ငံအနောက်ခြမ်း၊ ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း မေယုမြစ်ဝှမ်း တလျှောက်တွင် လူနည်းစု ( minority ) များ မဟုတ်ကြပါ။ “လူများစု” ( majority ) များသာဖြစ်ကြ ပါသည်။ သူတို့၏ လူဦးရေတိုးပွားနှုန်းက အလွန်လျှင်မြန်သဖြင့် ယခု ဘူးသီးတောင်၊ မောင်တော ဒေသတွင် ဘင်္ဂါလီနှင့် ရခိုင်လူဦးရေ အချိုးအစားမှာ 94: 06 ဖြစ်ပါသည်။ ရသေ့တောင် မြို့နယ်၏ demographic data ကို မသိရသော်လည်း ဘင်္ဂါလီနှင့်ရခိုင်လူမျိုး အချိုးအစား 70:30 လောက် ရှိမည်ဟု ခန့်မှန်းရပါသည်။ စစ်တွေမှာတော့ ဘင်္ဂါလီနှင့် ရခိုင်ဦးရေ အကြမ်းအားဖြင့် 40:60 လောက် ရှိသည်ဟု ဆိုပါသည်။ သို့ရာတွင် ဘင်္ဂါလီ ( lobby သမား )များ ကိုယ်တိုင်နှင့် ကမ္ဘာ့နိုင်ငံများ၊ ကမ္ဘာ့အဖွဲ့အစည်းများ၊ ကမ္ဘာ့မီဒီယာနှင့် မူဆလင်ကမ္ဘာက သူတို့ကို လူနည်းစု ( minority ) ဟုချည်း ပဲရည်ညွှန်းသုံးစွဲနေကြပါသည်။ တကယ်မသိကြလို့လား၊ သိလျှက်နှင့် တမင်သုံးစွဲနေကြတာလားဟု ထင်မှားဖွယ် ဖြစ်ပါသည်။ ထိုသို့ “minority” ကို တာဝန်မဲ့သုံးစွဲသဖြင့် ဗုဒ္ဓဘာသာ ဝင်လူများစုတို့က မူဆလင်ဘာသာဝင် လူနည်းစုကို ဘာသာရေးစစ်ပွဲဆင်နွှဲနေဟန် အထင်ရောက်စေပါသည်။
ဘင်္ဂါလီများ၏ မွေးဖွားနှုန်းနှင့် ပတ်သက်၍ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး သိန်းဌေးက ဘင်္ဂါလီ ဦးရွှေရောက်ဒူလာ မိသားစုအကြောင်းကို ဥပမာပေး ပြောကြားခဲ့ပြီး ဦးရွှေရောက်ဒူလာတွင် မိန်းမ လေးဦး၊ သားနှင့်သမီး ၂၈ ဦး၊ မြေးများ ၄၉ ဦး စုစုပေါင်း မိသားစုဝင် ၈၂ ဦး ရှိကြောင်းနှင့် မွေးဖွားနှုန်းကို ဖော်ပြရန် "စကားလုံး ရှာလို့ မရနိုင်ကြောင်း" ပြောကြားခဲ့သည်။ ( ၃၀ ဇူလိုင် ၂၀၁၂ )
ရခိုင်လူမျိုးများသည် တပြည်နယ်လုံးတွင်သာ လူများစုဖြစ်ပါသည်။ ဘင်္ဂါလီတွေက သူတို့ မူဆလင်တွေကိုသတ်ဖြတ်ပြီး စုပုံထားသည်ဆိုသည့် လုပ်ကြံ၊ လီဆယ်ထားသောဓါတ်ပုံများကို၎င်း၊ အသတ်ခံရသည်ဆိုသော မဟုတ်မမှန်၊ ယုတ္တိမတန်သည့် ကိန်းဂဏန်းကို၎င်း ဖြန့်နေကြပါသည်။ နိုင်ငံတကာကလည်း သူတို့ကို သံယောင်လိုက်ကာ “Rohingya minorty” တွေကို လူသားချင်းစာနာ ကြပါ ဟုချည်း တွန်းပြောနေကြ ပါသည်။ ဘူးသီးတောင်၊ မောင်တော မြို့နယ်ထဲက လူဦးရေ၏ ၆% မျှသာရှိ သော ရခိုင်လူနည်းစု ( minority ) တို့၏ အရေးအကြီးဆုံး လူ့အခွင့်အရေး ဖြစ်သည့် “အသက်ခန္ဓာ လုံခြုံမှု” ကိုကား ယောင်၍မျှ ပါးစပ်မဟကြပေ။
ဒုတိယအကြိမ် ဘက်မလိုက်ဘဲရေးရလျှင် တောင်ကုတ်မြို့နယ်မှာ ရခိုင်လူဦးရေက အများစု ( majority ) ဖြစ်ပြီး ရခိုင်လူမျိုး ( ဖြစ်ဟန်ရှိသူ ) တွေက တောင်ကုတ်ကားလမ်းပေါ်မှာ လူအုပ်ဖြင့် ပိတ်ဆို့ကာ ဘင်္ဂါလီ လူမျိုးဆယ်ဦးကို သတ်ဖြတ်ခဲ့ခြင်းကတော့ အလွန်အရုပ်ဆိုးသော majority က minority ကို အနိုင်ကျင့်မှု ဖြစ်ပါသည်။ ထိုအပြုအမူကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကလည်း စိတ်မသက် မသာ ဖြစ်ခဲ့ဟန်ရှိပြီး “ဒါ တရားဥပဒေမစိုးမိုးတာပဲ” ဟု ပြောခဲ့ပါသည်။ ရခိုင်လူမျိုးများနှင့် မြန်မာနိုင်ငံသား အများစုက ဤ ရခိုင်-ဘင်္ဂါလီအကြမ်းဖက်မှုအပေါ် သူမ တစုံတရာ ဖြန်ဖြေ ပြောဆို သည်ကို ကြားလိုကြ သော်လည်း သူမက အားလုံး၏စိတ်ကွက်မှု ကိုခံယူ၍ ရေငုံနှုတ်ပိတ်နေခဲ့ပါသည်။ ကျနော့်အနေဖြင့် လည်း ကျနော်တို့၏ “ဒီမိုကရေစီ အနာဂါတ်ခရီး” အတွက် သူမကို တိုင်းပြည်က၊ အထူးသဖြင့် တိုင်းရင်းသား လူမျိုးစုတိုင်းက အထူးချစ်ခင်နေဖို့ လိုအပ်သည်ဟု ယုံကြည်သဖြင့် အများနည်းတူ သူမကို တစုံတရာ ဝင်ပြောစေလိုခဲ့သော်လည်း ဘာမှမပြောခဲ့သည့်အတွက် သူမ၏ “ပွဲလန့်တုန်း ဖျာမခင်းတတ်မှု၊ နိုင်ငံရေးအမြတ်မထုတ်တတ်မှု” ကိုတော့ အံဘွယ်ဘနန်း မြင်လိုက် ရပါသည်။
ဤပွဲမှာ အကြီးအကျယ် နိုင်ငံရေး အမြတ်ထွက်သွားသူကတော့ သမ္မတကြီးဦးသိန်းစိန်နှင့် သူ၏ အစိုးရအဖွဲ့ ( ဝန်ကြီးအချို့ ) ဖြစ်ပါသည်။ ကျနော်သည် သမ္မတကြီးကို ထောက်ခံ အကောင်းမြင်သူ တဦးသာဖြစ်ပြီး၊ တချို့လူတွေလို သူဘာလုပ်လုပ် အပြစ်ပြောဖို့ စောင့်နေသူမဟုတ်ပါ။သို့နှင့်ပင် လည်း ယခုလူတွေက အထူးသဖြင့် ရခိုင်လူမျိုးတွေက အုံးအုံးကြွက်ကြွက် ထောက်ခံနေကြသော UNHCR ကော်မရှင်နာမင်းကြီးကို သမ္မတကြီးပြောလိုက်သည့်စကားကို သူ တကယ် ထိုသို့လက်တွေ့ လုပ်နိုင်လိမ့်မည်ဟု ယုံကြည်၍ပြောခဲ့သည်ဟု ကျနော်မယုံကြည်မိပါ။ သမ္မတ တယောက်အနေနှင့် UNHCR က ထိုသို့လုပ်ပေးဖို့ မဖြစ်နိုင်သည်ကို သူ မသိမဟုတ်၊ သိပြီးဖြစ်ပါလိမ့် မည်။ ထိုသို့ သိလျှက်နှင့်ပင် ( ညှာညှာတာတာ တွေးပေးရလျှင် ) ရခိုင်တွေက “ဗမာလက်အောက်မှာ မနေဘူး၊ အခု Federal Union လောက်နဲ့ မကျေနပ်နိုင်တော့ဘူး။ Independence ပဲ လိုချင်တယ်” ဟု အသံထွက် လာကြ၍ ဇာတိပုည ဂုဏ်မာန ထက်သန်လွန်းသည့် ရခိုင်လူမျိုးတွေကို နှစ်သိမ့်သည့် အနေဖြင့် သော်၎င်း၊ ( မညှာမတာ တွေးပေးရလျှင် ) ဒေါ်စုက “မူ”သမား ( person of principle ) တယောက် ဖြစ်သည်နှင့်အညီ အကြောင်းတခုခုရှိ၍ ( ဥပမာ၊ တောင်ကုတ် ၁၀ လောင်းပြိုင် လူသတ်မှုကို ကိုယ့်ဖက်က လွန်သည်ထင်၍ ) ရခိုင်-ဘင်္ဂါလီပဋိပက္ခတွင် ဘာမှဝင်မပြောသာဘဲ ရှိနေရာ၊ ရခိုင်လူမျိုးများ အပါအဝင် မြန်မာနိုင်ငံသား ၉၀% လောက်က အားမလို အားမရ၊ မကျေမနပ် ဖြစ်နေကြခိုက် သူ့သမ္မတသက်တမ်း အတွင်း ရခိုင်ပြည်နယ်၏ ထောက်ခံမှုကို ရယူလို၍၎င်း ပြောခဲ့သည်ဟု ယူဆပါသည်။
တောင်ကုတ် ကားလမ်းလူသတ်မှုသည် မူဆလင်လူငယ် ( ၃ ) ဦးက ရခိုင်လူမျိုးမိန်းမပျိုတဦးကို ပစ္စည်းလုယက်၊ မုဒိန်းကျင့်ရုံဖြင့် အားမရသေးဘဲ ဓါးဖြင့်သတ်ဖြတ်ခဲ့ကြသည်ကို ဒေါသထွက်နေသော လူအုပ်ကြီးက စိတ်မထိန်းနိုင်ဘဲ ပြုမူခဲ့ကြခြင်းဖြစ်ပြီး မျိုးချစ်စိတ်အစွန်းရောက်သော၊ ကိစ္စရပ်များကို ပုဂ္ဂိုလ် တဦးချင်း၊ ကိစ္စတခုချင်း အနေနှင့် ရှုမြင်ကျင့်မရှိဘဲ ( not being taken individually, but taken inarace/ group ) အုပ်စုအနေဖြင့် ရှုမြင်တတ်လေ့ရှိသူတို့များသည့် ( အထူးသဖြင့် ဆင်းရဲသော ) နိုင်ငံတွေမှာ၊ တရားဥပဒေစိုးမိုးမှု မကောင်းသည့် ( အထူးသဖြင့် အာဏာရှင်တွေ ကြာရှည် အုပ်ချုပ်ခဲ့ သည့် ) နိုင်ငံတွေမှာ ဖြစ်တတ်လေ့ရှိသည့် အဖြစ်အပျက်မျိုးသာ ဖြစ်ပါသည်။
ထိုသတင်းကိုကြားရ၍ သည်ဖက်အခြမ်းမှာ ဘင်္ဂါလီ ( majority ) တို့က ရခိုင် ( minority ) တို့ကို ဂလဲ့စားချေသည့်အနေဖြင့် ဦးစွာ တိုက်ခိုက် ( သတ်ဖြတ်၊ နေအိမ်မီးရှို့ ) လာခဲ့ကြ ခြင်းသာ ဖြစ်ပြီး၊ ဗုဒ္ဓ ဘာသာဝင်ရခိုင်တွေက အစ္စလမ်ဘာသာဝင် ဘင်္ဂါလီတွေကို စတင် တိုက်ခိုက် ခဲ့ကြတာ မဟုတ်ပါ။ မြန်မာစစ်တပ် ကလည်း အထက်အမိန့်ရလျှင် ၁၉၈၈ ဒီမိုကရေစီ တော်လှန်ရေး၊ ၂၀၀၇ ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေးတို့တွင် ဗုဒ္ဓဘာသာ ရဟန်းတော်များကိုပင်“သင်္ကန်းဝတ်” များဟုဆိုကာ ပစ်ခတ်ခဲ့ဖူးသော်လည်း ယခုတကြိမ် ( အစိုးရသစ်၊ ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်သစ်လက်ထက် ) တွင်တော့ ထူးထူးခြားခြား သဘောကောင်းကာ လချီကြာသော အဓိကရုဏ်းတခုလုံး အတွင်း ချီတက်လာကြသော လူအုပ်ထဲ သို့ သေနတ်မပစ်ဖောက်ခဲ့ပါ။ စဉ်းစားကြည့်ကြရအောင်။ စစ်တပ်က သေနတ်ဖြင့်မပစ်ဘဲ မောင်တော၊ ဘူးသီးတောင်၊ ရသေ့တောင်၊ စစ်တွေလို ဘင်္ဂါလီတွေ လူများစုဖြစ်သည့် မြို့နယ်တွေမှာ မူဆလင် ထောင်သောင်းချီ အသက်ဆုံးရှုံး နိုင်ပါမည်လား။
သို့ရာတွင် ဘင်္ဂါလီနိုင်ငံရေးသမားတွေက ( တရားဥပဒေ စိုးမိုးမှု မရှိခြင်းပြဿနာဟု ရှုမြင်အပ်သော တောင်ကုတ်တိုက်ခိုက်မှုမှအပ ) ရခိုင်ပြည်နယ် မြောက်ပိုင်းတွင် ဘင်္ဂါလီများဖက်ကသာ စတင်တိုက်ခိုက် ခဲ့ကြသည်ကို “ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များ၏ လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှု” အဖြစ် အဆမတန် ပုံကြီးချဲ့ခဲ့ကြပါသည်။ တကယ်တော့ ၃၀-၇-၂၀၁၂ သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲတွင် နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီး ဒု-ဗိုလ်ချုပ်ကြီး သိန်းဌေး၏ တရားဝင် ပြောကြားချက်အရ အဓိကရုဏ်းအတွင်း ရခိုင်လူမျိုး ၃၁ ဦး၊ ဘင်္ဂါလီ ၄၆ ဦး စုစုပေါင်း ၇၇ဦး သေဆုံးပြီး၊ ၁၁၂ ဦးသာ ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရရှိခဲ့သည်ကို( ဤသတင်းကို ယုံပါသည် ) “ဘင်္ဂါလီတွေ ထောင်ချီသေကြခဲ့ရသည်” ဟု သတင်းတွေကို ကပြောင်းကပြန် ပုံဖျက်ခဲ့ကြလေသည်။
ဖတ်ရတာ ကြိုက်သေးလျှင် အပိုင်း ( ၃ ) ကို စောင့်ဖတ်ပါ။ ကျနော် ခဏ နားပါဦးမည်။
၃။။ သူတို့ ဘာကြောင့် “ရိုဟင်ဂျာ” ဖြစ်ချင်ကြသနည်း။ ( Why Do They Want To Be Rohingyas ? )
၄။ ပတ်သက်သူများ အားလုံးသို့ အကြံပြုခြင်း ( Suggestions to All Concerning Parties )
ကုလသမဂ္ဂအထူးကိုယ်စားလှယ်ကင်တင်နား၏ ရခိုင်အရေးကိစ္စ သ...
ပြည်ပမီဒီယာများ၏ မသာမာမှုများကို မျက်ဝါးထင်ထင် သူတ...
နိုင်ငံတနိုင်ငံ၏ ဖွဲ့ စည်းအုပ်ချုပ်ပုံကို ပြောင်း...
ကင်တားနားရဲ့ မစ်ရှင်ဟာ ပြန်ပြီးတော့ မေးခွန်းထုတ်စရ...
အကြောင်းတိုက်ဆိုင်လို့ ရိုဟင်ဂျာ တွေက မူဆလင်ဖြစ်ပြ...
ဘူး သီး တောင် သား တ ယောက် က ပြော ပြ မည့် ဘ င်္ဂါလီ...